မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: Sanctions from Myanmar . . ( Dr Hlaing Myint )
နယ်သာလန် ရှိ ကျောင်းများတွင် ပိတ်ထားသည့် အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ဆာဗာမသိဘဲ ဝင်သည့်ဝက်ဆိုဒ် ။
အလွန်နှေးသည့် အင်တာနက်တွင် ဓါတ်ပုံတင်ရန်ပါ တီထွင်နေပါသည် ။
ကျနော်ပြောခြင်သော Sanctions အကြောင်း ( အပိုင်း ၂ ) - ရေးသူ-ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်
by Maung Maung Wann on Tuesday, January 4, 2011 at 7:02am
ကျနော်ပြောခြင်သော Sanctions အကြောင်း ( အပိုင်း ၂ )
န.အ.ဖ ဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေ လက်ထဲရှိရှိသမျှ ဓနဥစ္စာ.ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို....
( တနစ်ကိုကားပါမစ်..၃၀၀၀၀- ခန့် ကို
ပျှမ်းမျှ..ပါမစ်တစ်စောင်ကို...ဒေါ်လာ.တစ်သောင်းခွဲ ( ၁၅၀၀၀--) နုံး နဲ့အသားလွတ် ရိတ်ယူတော့..
ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ငွေကြေး...ဒေါ်လာ..သန်းပေါင်း...၅၀၀ ခန့်နစ်စဉ်ရိတ်ယူ သဲ့ယူလိုက်ပါတယ်
သန်းပေါင်း...( ၅.၀ ) ဘီလျှံ ( 5.0 ) Billions အသားလွတ်ဝိုက်ယူထားပါတယ် ။
ကားပါမစ်ကို သန်းရွှေ က အဓိက ကိုင်ထားပြိး
မောင်အေးကို နဲနဲပါးပါး လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ် ။
ဖုံးပါမစ်ကလဲ..ဖုံးတလုံးကို..ကုမ္မဏိကနေ အရစ်ကျနဲ့ ယူတယ်...
ပြည်သူတွေဆီကနေ...ဖုံးတလုံး.( ၄ားရမ်းတာနော် ..အပိုင်ပေးတာမဟုတ်သေး )
အပြင်ဈေးနုံးကဒေါ်လာ .၃၀၀၀.ကနေ .၄၀၀၀ အထိရောက်အောင်တင်းကျပ်ပြိး ဈေးတင်ရိတ်လိုက်တော့..နှစ်စဉ်..
ဒေါ်လာ..သန်းတစ်ရာခန့်အသားလွတ်ရိတ်ယူပါတယ် ။
ပြည်သူ့ ငွေတွေ..ဒေါ်လာသန်းပေါင်း..( ၁.၅ ) ဘီလျှံ လောက်
(ကုမ္မဏိကနေ သူတို့ ယူထားတဲ့ဈေးက...တိုင်တွေ တာဝါတွေ စက်တွေ အာလုံးထဲ့တွက်မှ..ဖုံးတလုံးကို..ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက်ကုန်ကျတာ ကို..
ပြည်သူတွေက. ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ) ပေးရတာဘဲ ။
စုစုပေါင်း..ဒီဖုံး နဲ့ ကားပါမစ်နစ်ခုထဲကတင်...ပြည်သူ့ ငွေတွေ..ဒေါ်လာ နဲ့ ဆို.. ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာတင်....ဒေါ်လာသန်းပေါင်း..ရ.၀ ဘီလျှံ..အစိုးလက်ထဲနဲ့ ..ကြိုင်ကြိုင်တို့ တ၀က်ဆီခွဲယူလိုက်ကြပါပြီ ။ ပြည်ပအခြေစိုက်စိးပွားရေးပညာရှင် ကြိးများက
ဒီရိတ်ထားတဲ့ ငွေ..ဒီမျှကြိးမားတဲ့ ငွေပမာဏ နဲ့ 
ပြည်သူတွေ ငွေခန်းခြောက်သွားတာကို ထဲ့မဝေဖန်ကြတာ
မမြင်ကြလို့ လား..ကျနော်မသိတတ်ပါ ။
အရေးမကြိးလို့ လား ။
အခု သူတို့ က ဒီငွေတွေ အပြင်တခြား မြေချပေးတာ...လုပ်ငန်းပါမစ် ..စတဲ့ ပြည်သူငွေကိုညှစ်ယူတဲ့ ပါမစ်နို့ ညှစ်စီမံကိန်းကြိးနဲ့ 
ဘီလျှံ ပေါင်း..၁၅..ဘီလျှံ...အထက်မှာ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။
သူတို့ အုပ်ချုပ်ရေးမခိုင်မြဲတာ သူတို့သိနေလို့ တိုင်းပြည်မှာပြန်မရင်းနှီးကြဘဲ...
တပါးနိုင်ငံတွေမှာ ၀ှက်ထား..ခိုးပြိးရင်းနှိးထားကြပါတယ် ။
ကိုယ်ပိုင်တာကို အရင်ပြန်ရင်းနှီးကြပါအုံး ။
၀ယ်ဖို့ အထိပင် အဖိုးကို ပူဆာတယ်ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး ။
သူတို့ မှာမတရားနည်းနဲ့ ရထားတဲ့ငွေတွေ..
ဒေါ်လာ ဘီလျှံ..ဆယ်ဂဏန်းဘက် နီးပါတယ် ။
န.အ.ဖ ဟာ နိုင်ငံအရေးလုပ်သူကိုမဆိုထားနှင့်
နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ပတ်သက်သူကိုပင် မညှာတာပါ။
ဘာမှ လုပ်ကိုင်စားလို့ မရတော့အောင် ဘ၀ပျက်အောင်
သူတို့ ကိုယ်တိုင် SANCTION လုပ်ပါတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားတွေ ဆုံရုံလေးနဲ့ တင်
ဘ၀ပျက်အောင် sanction လုပ်ပါတယ် အနုပညာရှင်တွေ စာရေးဆရာတွေ ကို
အနုပညာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ် ။
သူတို့ လုပ်တဲ့လူမှုရေး တွေမှာတော့ အနုပညာရှင်တွေကို..
မပါမနေရပါခိုင်းပြိး...တကယ်လူမှုရေး အဖွဲ့ တွေကို
သွားကူလို့ ပိတ်ပင်တာဟာ...ဥပဒေမဲ့ sanction ပါဘဲ ။
အခုဆို ပိုဆိုးလာပါတယ် ။
လူမှုရေးလုပ်တဲ့ ဥိးကျော်သူ ကို ငွေကူတဲ့သူတွေကိုပါ ရန်လုပ်လာပါတယ် ဒါဘာကိုပြသလဲဆိုရင်....နိုင်ငံအရေး( အများအကြိုး ) လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့...သန်းရွှေဟာ
လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ရှိသူ ( ပရဟိတ စိတ်ရှိသူ ) တွေကိုပင်.....ဒီလူတွေဟာတရက် တိုင်းသူပြည်သားတွေအရေး စဉ်းစားလာမဲ့ သူတွေ..
တရက်ငါ့ကို ရန်သူလို့ မြင်လာမဲ့သူတွေ လို့ ..potential enemy လို့ရှုမြင်ထားတာမို့ ...အဲဒီလူမှုရေးလုပ်သူတွေကို ညစ်ပတ်တော့တာပါဘဲ သူဟာ အတ္တကြိးများလွန်းတော့..
ဒီပရဟိတ္တ စိတ်ရှိသူတွေနဲ့ရေရှည်အတူတွဲလို့ မရဘူးဆိုတာ သိနေပါတယ် ။
သန်းရွှေရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေက NLD အဖွဲ့ ဝင်တွေ
နိုင်ငံရေးသမားတွေကို နိုင်ငံရေးဆက်မလုပ်နဲ့ 
လုပ်ငန်းတွေချပေးမယ် နဲ့ အကျပ်ကိုင်တယ် စည်းရုံးပါတယ် ရှင်းရှင်းကတော့.
အများအရေးစဉ်းစားရင် ရန်သူ.အဖြစ် အကျပ်ဆက်ကိုင်မယ်....
အတ္တ ( တကိုယ်ကောင်းစိတ် ) မွေးမယ်ဆိုရင် ကူညီမယ်..ဘော်ဒါပေါ့လေ
အနောက်နိုင်ငံတွေ ကျင့်သုံးတဲ့ ...CARROT & STICK ...
မုန့် စာမလား..မစားရင်..ဒုတ်စာမိမယ် အထိခြိမ်းခြောက်ပါတယ် ။
နှမ်းတစေ့နဲ့ဆီမဖြစ်ပါဘူး...
မိသားစုတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာ ကြာပြီ...
တနှစ်အတွင်းတိုက်ကြိးကားကြိးတွေနဲ့ဖြစ်လာစေရမယ်ပေါ့ ..
တခြား အဖွဲ့ ချုပ်လူတွေကိုလဲ
ခြိမ်းလဲခြိမ်းခြောက်တာ တပုံတပင်ကြိးပါ ။
အခုဆို အဆိုတော်တွေ အနုပညာရှင်တွေကို...
အနုပညာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့အထိ ယုတ်မာပြလာတာ...
ဒါ SANCTION အယုတ်မာဆုံး sanction ပါဘဲ အနုပညာအဖွဲ့ အစည်း..စည်းမျှဉ်းထဲမှာ...
လူမှုရေးမလုပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်မှ မရှိထားဘဲ ..
ဒါဟာဥပဒေမဲ့ sanction လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်တခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ 
( ကျနော် တဥိးထဲအမြင်ပါ )
န.အ.ဖ ဟာတကယ်ဘဲ ပိတ်ဆို့ မှုတွေကို
သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရုတ်သိမ်းစေလိုတဲ့ ကိစ္စဟာ.....
စိးပွားရေး ( ပြည်သူတွေအတွက် တကယ် စံပြစိးပွားရေး ) တခုဖေါ်ဆောင်နိုင်အောင်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှနေပြိး...နိုင်ငံခြားနဲ့ စိးပွားကုန်သွယ်ဖို့ ....
အနေနဲ့ ( ဥပမာ ) အထည်ချုပ်( ချုပ်ထည်တွေ ) ကို
တင်ပို့ တာ လုပ်စေချင်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေက
န.အ.ဖ လိုချင်တဲ့ ဈေးကွက်ဖွင့်ပေးတာ ပိုမြန်သွားပါမယ် ။
အလုပ်သမားတွေကိုလဲ လူလူသူသူ လုပ်ခပေးလာနိုင်ပါမယ် ။
န.အ.ဖ သာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အတွက်
တကယ် ပိတ်ဆို့ တာတွေ ပွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင်..
ဒေါ်စုက လက်တွေ့ ပွင့်လာအောင်
ကိုယ်တိုင် ပို့ ကုန်တွေကိုတင်ပို့ ပေးဖို့ ..အဆင်သင့်ပါခင်ဗျာ ။
အဲဒါဆို...သန်းရွှေ လက်ခံနိုင်ပါမလား ။
လက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖွင့်ပေးမယ်လေ ။
အခုဒေါ်စုသာ အဲဒီလို ကုန်သွယ်ခွင့်ကုမ္မဏီထောင်ဖို့ လျှောက်ထားလိုက်ရင်...
သန်းရွှေ ခွင့်ပြုမယ် မပြုဘူးဆိုတာကို...
၉-တန်း ၁၀ တန်း..ကလေးတွေတောင်သိပါတယ်.. ။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေ အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြိးတကြောင်း....
ပြည်သူပေါ်ထားတဲ့ သန်းရွှေရဲ့ စိတ်ထားအမှန်ကို
ပြည်သူတွေ လက်တွေ့ ကျကျ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိမြင်လာအောင်...ကုမ္မဏီတခု
( ကျနော်တဥိးထဲအမြင်ပါ )..ဒီကိစ္စကို ဝေဖန်ချက်ပေးကြပါခင်ဗျာ ။
SANCTION ဆိုတာ ဘယ်သူကစတာလဲ..
လက်တွေ့ ကြည့်ကြရအောင်ပါ ။
ပါးစပ်ပါတိုင်း လျှောက်အော်မနေပါနဲ့။
( ထိုင်းနဲ့တရုတ် )ကို....ဓါတ်ငွေ့ တွေ
ထိုးရောင်းတာကိုလဲ အရင်ရပ်ပါ အုံးခင်ဗျာ ။
န.အ.ဖ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသရေဖျက်ဖို့ ...
သူတို့ အုပ်ချုပ်တာ..လတ်ပေးလတ်ယူမှုလွန်ကဲလွန်းလို့ စိးပွားပျက်ရတာကို..
တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်လုပ်ချင်တာ သက်သက်ပါ ။
အခုsanction ကိစ္စအော်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘဲ ထိမယ်...
သူတို့ ကိုမထိဘူး ထင်နေတာကိုက..
ဥိးဏှောက်က ကလေးသာသာ ဘဲရှိတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပါဘဲ ။
တကယ်တော့ သန်းရွှေဥိးဏှောက်ဟာ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါဘူး ။
အလွန်ပါးနပ်တဲ့ ဥိးဏှောက်ပါ ။
တော်လို့ လဲ ..အရည်အချင်းဘာမှသိပ်မရှိဘဲ
ဒီနေရာကိုရောက်အောင် နဲ့မြဲနေအောင်လုပ်နိုင်တာပါ ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ ဟာ သူ့ ဥိးဏှောက်ရဲ့ ..၉၀ % နဲ့ သူ့ အချိန်တွေရဲ့ ..၉၀ % ကို...သူ့ အာဏာတည်မြဲရေး...သူ့ သားစဉ်မြေးဆက် အာဏာဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်းရေးဘက်ကိုပဲ ဥိးစားပေးစဉ်းစားနေတာမို့ 
တိုင်းပြည်အရေးကို မစဉ်းစာနိုင်တာပါ ။
ခိုးထားတာတွေများလာလေ ပိုပိုပြိးပူပင်ရလေ ဖြစ်လေဘဲ ။
တခုတော့ ရှိပါတယ် ။
ကျနော်ဟာ..၉၃..ကနေ ၉၆ ( အဖမ်းခံရချန်အထိ ) ပြည်ပကို ငါးတင်ပို့ ပါတယ် ။
၀န်ကြိးတွေ နဲ့ တိုင်းမှုးတွေက အစည်းအဝေးမကြာခဏခေါ်တော့ ...လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးက လိုအပ်တာတွေကို တင်ပြကြရပါတယ် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ၀န်ကြိးတွေ တိုင်မှုးတွေ
မျက်ကိုကြည့် စကားမမှားအောင် ကြည့်ပြောကြရပါတယ် ။
၀န်ကြိးတွေကလဲ မထင်ရင် ဟိန်းဟောက်တာပါဘဲ ။
အခုထောနေတဲ့..ယုဇနဥိးဌေးမြင့်တို့ အပါအ၀င်ပေါ့ ။
အဲဒီတော့ ကျနော်ကတော့ လိုအပ်တာကို...အပိုင်ချည်တုတ်ပြိး...
လက်မံခံမချင်း ထပြောတော့တာပါဘဲ ။ အဲဒီမှာ..ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြိး....ဗိုလ်မှုးချုပ်မောင်မောင်က
ကျနော်ပြောတာ တင်ပြတာတွေကို.. စတင်လက်ခံလာပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြိးဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြိးထွန်းကြည် နဲ့ တည်ရတော့တာပါဘဲ ။
ကျနော်က ထုံးစံအတိုင်း အချက်အလက်နဲ့ မလျှော့ဘဲ ဆက်တင်တာပါဘဲ ။
ပထမတော့ ခေါ်ကြိမ်းတယ် ။
ခင်ဗျား လူကြိးတွေနဲ့ စကားပြောရင် မရိုင်းရဘူးဘာညာပေါ့ ။
နောက်တော့ သူတို့ တသက်မှာ ( ကျနော်အထင်ပါ )..ကျနော်လို သူတို့ ကိုခံပြောရဲသူ ကျနော်တယောက်တလေဘဲ...တွေ့ ဘူးတာလား..
ကျနော်ပြောတာတွေကိုဘဲ တကယ်သဘောကျလို့ လားမသိ..
ကျနော်ကို...ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်...ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြိးထွန်းကြည်တို့ က မကြာခဏ ခေါ်ပြိးဆွေးနွေးပါတော့တယ် ။
အဲဒီလိုဆွေးနွေးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က (ခင်ဗျားဗျာ...နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ပါဘူး
ခံဝန်ချက်လေးရေးတင်ပေးပါလားဗျာ တဲ့။
ခင်ဗျားကို တွေ့ ဆုံခွင့်ကျနော်မှာ မရှိဘူး ။
ခင်ဗျားကြောင့် ..ပြိး တပ်ချုပ်ကြိးဆီက အရာရှိပါလာထိုင်နေတာပေါ့လေ ။
ကျနော်ကလဲ.. ဗိုလ်ချုပ်ကြိးလဲ အခု နိုင်ငံအရေးလုပ်နေတာဘဲလေ ။
ရာထူးယူထားတော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ ။
ကျနော်လဲနိုင်ငံအရေး ရာထူးတောင်မယူဘဲ လုပ်နေတာ..ဘာပြသနာရှိလဲပေါ့ အဲဒီမှာသူက ( ဟာ...ခင်ဗျားက မန်းလေပြဲလေ လူစားဘဲ ) ဆိုပြိး ပြောပါတယ် ။
အဲဒီတုံးက ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်နဲ့ဆွေးနွေးခွင့်မရှိတော့..
ဒု-၀န်ကြိးတွေနဲ့ ... ဆွေးနွေးရတာပေါ့ ။
အဲဒီတုံးက..သူက ပိန်သေးသေးလေး အခုရုပ်နဲ့တခြားဆီ ။
၀န်ကြိးနဲ့ ကတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိတဲ့လေ ။
သန်းရွှေ ရုံးကအရာရှိက ယူသွားပြိး နောက်မှ ၀န်ကြိးတွေဆီပြန်ပို့ တာ ဗြောင်ထိုင်နားထောင်တယ်...၀င်မပြောဘူး.. အသံဖမ်းစက်ကလဲ ဗြောင်ဘဲ ။
ထားပါတော့..နောက်တော့..၉၆ -မေလမှာ ကျနော်ကိုဖမ်းပါလေရော....
အခု နံမည်ကျော်..မသာကောင်လေး နေရွှေသွေးအောင်..မွေးနေ့ ညပေါ့ဗျာ...
မေလ ၂၂ -ရက်နေ့ ည ပေါ့ ။
မသာကောင်လေး ငါးနစ်ပြည့်ည မှာ
ကျနော်မျိုးကို( ငါးည ) နဲ့ အဖမ်းခံရပါလေရော ။
သန်းရွှေတို့ ကြိုင်ကြိုင်တို့ က အချစ်ဆုံးမြေးလေး ကုသိုလ်ပိုရဖို့ ...
အဲဒီနေ့ ကလူတွေကို တန်းစီပြိးဖမ်းထဲ့လိုက်တာပါဗျာ ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်...စိးပွားနင့် စိမံရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဌ ဥိးကြည်မောင်မှ
(ပင်လုံဥိးခင်မောင်..တောင်ကြိးကိုယ်စားလှယ်ဥိးကျော်ခင် )တို့ မှတဆင့်...
ကျနော်ကို နိုင်ငံတော်စိးပွားရေး ရေတိုရေရှည်စီမံကိန်းတွေ ရေးခိုင်းလာပါတယ် ကျနော်ရေးထားတာ...
စာမျက်နာ ၁၈ မျက်နာ ခန့် အရမှာ လာဖမ်းတော့...
ဒါတွေပါ အဖမ်းခံရတဲ့အထဲပါသွားပါရော ။
ကျနော်ဆီကနေ မြေပုံကြိးတွေလဲတွေ့ ကော...
မြေပုံကြိးတွေ မိတယ် ။
( ၄+၅ ပေ ) ရှိတဲ့ မြေပုံ.ကြိး ( ငါးချပ် )...
(သုံးမိုင်ကို..တစ်လက်မ နုံး နဲ့) ဆွဲထားတဲ့မြေပုံတွေ တွေ့ သွားတာကိုး အဲဒီမှာ အဲဒီမြေပုံနဲ့ ဆိုင်တာတွေကို အဓိက ဆက်စပ်ရှာဖွေတာ လုပ်ပါတယ် ။
အိမ်ကို ည.( .၁၂.၃၀ ) ၀င်ရှာတာ.. နံက် ( ၄.၃၀ ) မှပြိးပါတော့တယ်။
စာအုပ်တွေ ရှာတယ် မွှေတယ် ။
သူတို့ လူနဲ့ ထောင်ထားတဲ့
အိမ်ထဲ ၀င်ဝင်ချင်း..ပထမဆုံး...ဆွဲထုတ်ပါတယ် ။ တခုကဆို..စာအုပ်ဘီဒိုနစ်ခုကြားမှာ...တိပ်နဲ့ ကပ်ထားတာပါ ။
အဲဒါသူတို့ ထောင်ထားတဲ့စာရွက်ပါ ။
နောက် ကျနော်ထောင်ကျပြိး ကြာမှသီရတယ် ။
နောက် စစ်ကြောရေးမှာ..အဓိက က
ကျနော်ရေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်..မှာ လုပ်ဆောင်ရမဲ့
စိးပွားရေးစီမံကန်းတွေ..ဘယ်လို အောင်မြင်အောင် လုပ်ရမယ်
ဆိုတာတွေကို အဓိက ထားစစ်ပါတယ် ။
( ၁ ) သံလွင်မြစ်ပေါ်က မီဂါဝပ်..၆၀၀၀ ခန့် ရှိ( တာဆန်းရေအားလျှပ်စစ် )
ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့..၈ျပန်တို့ ပူးတွဲ..ပြိး ( ခိုး ) တိုင်းတာထားတဲံ စီမံကိန်းစာအုပ်.....
( စာမျက်နှာ..၄၀ -ခန့် ဟုထင် )
( ၂ )ကယားပြယ်နယ်ထဲက..( နံမည်မေ့နေ ) မီ၈ါဝပ်..၁၀၀၀ ကျော်..
ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းစာအုပ် ( ထိုင်း နဲ့ Australia ) တိုင်းတာထားတာပါ ။
( ၃ )နောက်..့ကရင်ပြည်နယ်ထဲက ....Australia..SNOWY MOUNTAIN နဲ့ ထိုင်းတို့ ပူးတွဲလေ့လာထားတဲ့..ကျိန်ခ၇မ် ( သို့ )..ကျိန်တလီ( ဟုထင် ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းစာအုပ်...စတာတွေတွေ့ ပြိး တော်တော်လေး ဖြုံနေကြပါတယ်
နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေသူတွေက ဘာမှ တိုင်းတာရ လေ့လာရကောင်းမှန်းတောင်မသိတာ...
သူတို့ မှာ စိးပွားရေးအမြင်မှ အားမပေးသလို...စစ်ရေးအမြင်ဘဲ ထိပ်ထားတာကိုး တိုင်းပြည်စိးပွားရေးဥိးမော့ဖို့စွမ်းအင်ဘယ်လောက်အရေးကြိးတယ်ဆိုတာကို
သူတို့မစဉ်းစားမိကြဘူး ။
မသိတော့...တွေ့ သမျှဓါတ်ငွေ့ တွေ
ဈေးပေါပေါ နဲ့ ရောင်းစာဖို့ ဘဲ သိတော့တယ် ။
အခု နိုဝင်ဘာလ - ၂ -ရက်နေ့ က စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့..
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ကြိး ပါသွားပါတယ် ။
အခု အာရှရဲ့ အကြိးဆုံး စက်မှုဇုံဖြစ်လာမဲ့ ဧရာမစီမံကိန်းကြိးပါ အဲဒီစီမံကိန်းကြိးနဲ့ ရာထားချက်အဖြစ် အခုနပြောတဲ့ မြေပုံကြိးတွေအပေါ်မှာ...
ကုန်တွင်းပိုင်းမှာဆက်သွယ်မဲ့လမ်းကြောင်းနေရာတွေ..ကို အမှတ်အသားတွေနဲ့မှတ်ထားတာတွေပါနေပါလေရော ။
ဆိုထားသူတွေနဲ့ ကျနော်နဲ့ အကြိးအကျယ် ပြသနာ ဖြစ်ရပါလေရော။
ဒါကျနော်က..အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်နဲ့ အဆက်ရှိထားတော့...
ဒါထားဝယ်ကို ထိုင်းနဲ့ အမေရိကန်ပူးတွဲတိုက်ပြိး ပြန်သိမ်းပိုက်ဖို့ ..
စစ်ဆင်ရေးစိမံချက်လို့ စွပ်စွဲပါလေရော ။
တစွပ်ထိုး..တယူသန်...ကျနော်ကို အတင်းဝန်ခံခိုင်းပါတယ် ။
၀န်ခံရင် သေဖို့ သာပြင်ပေတော့..
ဘာတွေ ဆက်ထပ် ညစ်မေးမေးအုံးမယ်သာတွက်ကြည့်တော့ ။
နောက်ဆုံး ကျနော်ကို ၀န်မခံလို့ဆိုပြိး....
ကျနော်ကို ငြင်းဆဲပါလေရော ။
စစ်ဆင်ရေးထင်တာနဲ့အမှုကတော်တော်ကို ကြိးနေပြီ ။
ငါး- မိနစ်တောင် မလုပ်နိုင်ဘူး ။
ဒုတိယတခေါက်မှာ..ဖနှောင့်အောက်မှာ...သံချေးတက်နေတဲ့ သံမှိုတွေ လေးငါးခု ချထားပါတော့တယ် ။
ကျနော်မေးကို လက်နဲ့ ညှစ်ထားပြိး...ပါးကိုရိုက် ပုတ်ပြိး...
ဆရာ..ဆရာနဲ့ ..လှုပ်နိုးနေတာ ဘဲသိတော့တယ်။
ကျနော့်အထင် ကျနော်..သတိလစ်ပြိး တက်သွားတယ်လို့ ဘဲ့ထင်မိပါတယ် ။
မသိဘူး..။ လူတကိုယ်လုံးလဲ ချွေးတွေ ရွှဲရွှဲ ဆိုနေပါတော့တယ် ။
ကျနော်သတိရတော့..ကျနော်ကိုဖိထားတာဘဲ သိတယ် ငါဘယ်ရောက်နေတာပါလိမ့် 
သူတို့ လဲ လန့် သွားလားမသိ...
ငြာတာတာလားမသိ..နောက်ပိုင်း သိပ်မကြမ်းတော့ဘူး ။
နောက်ကွယ်ကဘယ်သူတွေပါသေးတုံးနဲ့။
ပါတဲ့သူတွေကို ( ထိုင်းလူမျိုး နဲ့ဂျာမဏိလူမျိုး ) ၀န်ခံရပါတယ် ။
ထိုသူတွေကိုလဲ ဖုံးဆက်မေးပုံရပါတယ် ။
နောက်ဆုံး..ကျနော် ရေးထားတဲ့အထဲက တချို့ နဲ့ 
ကွန်ပျူတာ ဒစ်ကဒ် disket ထဲက ပါတာတွေ ကိုဖတ်ခိုင်းပြိး ရှင်းပြရပါတယ် ။
ဒါတောင် အထက်ကထပ်မေးလို့ နဲ့
လူကလဲ..ရက်ဆက်မအိပ်ရတော့ ခေါင်းတွေက ထုံထိုင်းမှိုင်းနေ..
လူကလဲ နာတွေချီဖျားလာ နဲ့တော်တော်လေးခံရပါတယ် ။
( အာလုံး...ခြောက်ည မှာ...တရက်က တစ်နာရီ..ကျန်ရက်တွေမှာ...နံက်မိုးလင်းခါနိုး..( နာရီဝက် ) ဘဲပေးအိပ်ပါတယ် ။
ခြောက်ရက်မှာစုစုပေါင်း..( သုံးနာရိဘဲ ) အိပ်ရပါတယ် ။
အဆိုးဆုံးက ရေမတိုက်တာပါဘဲ ။
အဲဒီအခါ မှာရေကို ခွက်တ၀က်ဘဲတိုက်ပါတယ် ။
အဲဒါဆို နောက်ထပ် ခြောက်နာရီလောက် အသံပြန်ထွက်လာပါတယ် ။
အဲဒိကျမှ သူတို့က လက်မခံချင် ခံချင် နဲ့လက်ခံပါတယ် ပြိးပြောသေးတယ်....စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းတဲ့လေ ။
၉၄ ၉၅ တလျှောက်လုံး သန်းရွှေက ရချိုင်ပြည်ဘက်ကို ခရီးအကြမ်ကြမ်ထွက်ပြိး...
ကျောက်ဖြူရေနက်စီမံကိန်း လုပ်နေချိန် ကိုး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေသူတွေကို..
စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းတို့ ပြောတာသာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ ။
ကြားထဲက ငထွားက ခံရတယ် ။
အဲဒီလောက်တော်ကြသူတွေက နိုင်ငံတော်ကို ဥိးဆောင်နေကြတာ ။
ထားတော့...ဒါထက်ပိုပြိး စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတာ...လာပါပြီ ။
စာဖတ်သူတွေတော့မသိ ကျနော်ကတော့ တော်တော်လေးကို..ဖျားသွားတယ် ။
ကျနော်က လူဆရာဝန်ပါ ။
စီပွားရေး အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းတွေကို ထိစပ်မိသမျှလေးလောက် သိနိုင်သူပါ ။
ဒါပေမဲ့ ကျနော် က တွေးတောတတ်တဲ့အကျင့်လေး...လေ့လာတတ်တဲ့အကျင့်လေးရယ်
ပြောရဲဆိုရဲတာလေးတော့ ရှိတယ် ။
တချို့ ဆရာဝန်ကြိးတွေ ကျနော်အကြောင်းသိကြပါတယ် ။
စိးပွားရေးအမြင်က ဘာမှမရှိပါဘူး ။
ကျနော်ကို စစ်ကြောရေးလုပ်တာ..အားလုံး..၁၃ -ရက်ကြာပါတယ် ။
အဖမ်းခံထားရသူတွေကို ( လူ ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိပါမယ် )...ရေချိုးချပါတော့တယ် ။
အားလုံး နစ်ပတ်ကျော်...ရေမချိုးကြရပါဘူး ။
စစ်ကြောရေးမှာ..နိုင်ငံရေးစစ်ချက်က..(.၁၁ )မျက်နာ ( ခန့်)လက်မှတ်ထိုးပေးရပါတယ် စိးပွားရေးစစ်ချက်ကတော့..၄၆ မျက်နာလောက် လက်မှတ်ထိုးပေးရပါတယ် ။
စိးပွားရေးစစ်ချက်တွေကို တမျက်နာကို လက်မှတ်..ခြောက်ခု ကန့် လန့် ဖြတ် ထိုးပေးရပါတယ် ။ အဲဒီနောက်..တလ ခန့် အရမှာ..ထောက်လှမ်းရေးက ဗိုလ်မှုး ( ဇော်လင်း ) နဲ့အမည်ထုတ်မပြာတဲ့ အရာရှိကြိးတယောက် ကျနော်ကို အချုပ်ထောင်မှာလာတွေ့ ပြိး ...ဆွေးနွေးပါတယ် ။
ဗိုလ်မှုးဇောလင်းကဘဲ အမေးအဖြေ လုပ်ပါတယ် ။
ထိုအရာရှိက လုံးဝ ၀င်မပြောဘူး ။
ဘေးကနေ ကျနော်ကို စိုက်ကြည့်ဘဲနေပါတယ် ။ ( ၃ ) နာရီခန့် ကြာပါတယ် ကျနော်ကိုပထမဆု့း..ကျနော်မှတ်စု စာအုပ်ထဲက
အချက်အလက်တွေ...လူကြိးတွေ ( နေ၀င်း..သန်းရွှေ..ခင်ညွှန့်) တို့အပေါ် ကျနော်မှတ်ချက်ရေးထားတာလေးတွေကို အစာမကြေ့ပုံရတယ် ။ အဲဒါတွေအသေးစိတ်မေးတယ် ။
နောက် တပ်မတော်ကြိးပြိုကျမယ်ရေးထားတာ ကို
နောက်မှ ကျနော်..စိတ်ကိုစစ်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။
ပြိးမှ ခင်ဗျားက ခံယူချက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်ထားသူဆိုတာကို
ကျနော်တို့ က သိထားပြိးသား...
ခင်ဗျားကို..၁၉၇၁ ခုနစ်ကထဲက စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကောသိလားပေါ့ ။ ထားပါတော့..နောက်ဆုံး..ကျနော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအမြင်တွေမေးတယ် ။
ရေးတယ် လက်မှတ်ထပ်ထိုးခိုင်းတယ် ။
ပြိးမှ...ကျနော်ကို သူတို့ ကို နိုင်ငံတကာက..ပိတ်ဆို့ လာတော့မယ် ။
အဲဒီအတွက် သူတို့ ကို လက်တွဲပြိး..လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်.. အကြံပေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်...ရက်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးမယ်ပေါ့ ။
ကျနော်က --ဟာဗျာ..ကျနော်က ပညာရှင်မှမဟုတ်တာ..
ခင်ဗျားတို့ မှာ..THINK TANK လို အဖွဲ့ ကြိးရှိတာဘဲ....
ပါရဂူကြိးတွေနဲ့ဖွဲ့ ထားတာတွေရှိထားတာမို့.ပြောတော့ ။
ပြန်ပြောချက်ကို ကျနော်တော်တော်လေးကို ဖျားသွားတယ် ။
လူကြိးတွေက အဲဒီအဖွဲ့ က ပါရဂူကြိးတွေ ၇ ယောက်ပေါင်းရဲ့ ခေါင်းက
နောက်မှ ခင်ဗျားတို့ကျနော်ကို ပင်ကိုအရှိထက်အထင်ကြိးတာ သိပ်ပိုနေပြီ ။
ကျနော်က စီးပွားရေး အယူအဆ ( သီအိုရီ ) ကိုမပြောနဲ့ ..
စိပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေ ကိုတောင် မသိပါဘူး ။
ကျနော် သူတို့ ထက်သာတာက...
ကျနော် သင်မိ ကြားမိ ဆွေးနွေးမိတာ..မြင်တာကို...
ဘယ်သူ့ ကိုမဆို ရဲရဲ ပြောရဲတာ ဘဲရှိတာပါ ။
ကျနော် သူတို့ ကိုဥပမာလေးတခုပေးလိုက်ပါတယ်
ခင်ဗျားတို့ က..ဆီးချို..သွေးတိုး နှလုံးရော၈ါ..ရောဂါစုံ ရှိနေတဲ့ လူမမာကြိးနဲ့ တူတယ်
ဆရာဝန်ဆီပြတော့ ဆရာဝန်က စမ်းသပ်တယ်..တိုင်းတာတယ်...ဆေးကုမယ်ဆိုတော့..
ခင်ဗျားတို့ ကို ဆရာဝန်ကလဲ ( ပါရဂူ ကြိးတွေကလဲ ) ကြောက်တတ်တဲ့လူတွေ ။
အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့ ကလဲ..သောက်ရမဲ့ ဆေးဘဲပေး..
သွေးတက်နေတာ လာမပြောနဲ့ ...
ဆီးချိုနေတာ သွေးချိုနေတာလာမပြောနဲ့ ....
ဟိုလူတွေခမြာ....သိသော်လဲ..တွေ့ မိ စဉ်းစားမိသော်လဲ..
မသိတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
ကြောက်နေလို့ ..မပြောရဲကြတာပါဘဲ လို့ ဘဲ ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ် ။
ဂျပန်က THINK TANK အဖွဲ့တခုကို..၁၉၉၃ ၀န်းကျင်က လေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်
အတိုင်ပင်ခံ ခန့် ပါတယ် ။
နိုင်ငံတော် ရဲ့ စိးပွားရေးဆိုတာက...
ဒင်္ဂါးပြားတခုရဲ့ ..ခေါင်းနဲ့ ပန်း
( လုံးဝ ) ကို ခွဲခြားလို့ မရနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ ။
အဲဒီတော့ ဟိုက ထု့းစံအတိုင်းနိုင်ငံရေးကို
( နဲနဲလေး ) ထဲ့သုံးသပ်ထားတာပါတာနဲ့ 
ကျနော် နောက်ပိုင်း စဉ်းစားမိတိုင်း...
တိုင်းပြည်အတွက်တွေးမိတိုင်း ကျောချမ်းမိတယ်ဗျာ ။
ဒေါက်တာရမ်းကု နည်းနဲ့ ချကြတော့မှာဆိုတာ
သူတို့ ဘာမှမသိမတတ်ဘူးဆိုတာ သိပ်ရှင်းနေပါပြီ ။
အဲဒိတော့ စာဖတ်သူအပေါင်းသိအောင်ပါ ။
ကနေ့န.အ.ဖ လုပ်လိုက်တဲ့ ထားဝယ်ရေနက်စီမံကန်း...
အလွန်အရေးပါတဲ့ စိမံကိန်းကြိးတွေမို့ ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကို..အကူအညီတောင်းပြိး...
ပထမ စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းလေးဘာလေးနဲ့ .....
အမြင်တော်ကြတာ သိရအောင်မျှဝေလိုက်တာပါ ။
ကျနော်တော်ကြောင်းတတ်ကြောင်းလဲ မယူဆပါ ။
ပြောရဲတာဘဲ ရှိတာပါခင်ဗျာ ။
ကျနော်ဆီကနေရတာ မဟုတ်ဘူး ငြင်းချင်ရင်....
ဗိုလ်ခင်ညွှန့်မသေသေးပါဘူး..
ကျနော်ကိုစစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြိးစိုးဝင်းနဲ့အဖွဲ့ တွေ....
ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့ ဝင် ၇ ယောက်ရှိနေပါသေးတယ် ။
ဒီစီမံကိန်းကြိးကို သတင်းရလို့ဥိးနေ၀င်းကပင်
ခင်ညွှန့် ဆီကနေ တောင်းယူတယ်ဆိုတာ..
အေးနေ၀င်းတို့ ပြောပြလို့ လဲ သိရပါတယ် ။
တော်တော် ခေါင်းပြေးတာဘဲ လို့ပြောခဲ့ပါသည် ။
ဥိးဝင်းထိန် အပါအ၀င် အားလုံးကို ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှအစ..
စစ်ခွေးတိုက်ပို့ ပစ်မည်အထိ ခြိမ်းချောက်ခံခဲ့ရပါသည် ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ ....
လျှို့ ဝှက် ကိုယ်ပျောက်ပါတီဝင်တဥိး ဖြစ်တာမို့ ...
ကနေ့န.အ.ဖ ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ ထားဝယ်ရေနက် စိမံကိန်းဟာ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံဆ ထားတဲ့ စိမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း..
အဲဒီတော့ စကားချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိးပွားရေး ကျဆင်းနေရတာက...
( ၁ ) နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့
ကိုယ်ပိုင်ဓန ဥစ္စာတွေ ကုန်ခမ်းနေတာက....
အဓိ့ ကျတဲ့အကြောင်းရင်းပါ ။
ကားပါမစ် ဖု့းပါမစ်စတဲ့ပါမစ်တွေနဲ့..
မြုံးနဲ့ ငါးထောင်ဖမ်းသလို..အ၀င်ဘဲရှိတယ် ။
အထွက်ပြန်မရှိတော့တာက အဓိက ဖြစ်ပါတယ် ။
သူတို့ပြန်မရင်းနှီးဘဲ ၀ှက်ထားတာ အဆိုးဆုံ့းပါဘဲ ။
တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်တိုင်ပထမဆုံးပြန်လည်ရင်းနီးကြပါ ။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ၀ှက်ထားတာလုံခြုံတယ် ထင်ရင်
တရက် ဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်သေရပါမယ် ။
( ၂ ) လတ်စားမှု ဆိုးဝါးလွန်းတာကြောင့်
ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးပြေးကြရတာအများကြိးပါ ။
ပြသနာဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့ မေါ်ရင် ရတယ်..
လူကြိးပြိးရင်ပြီးတယ် ဘာညာနဲ့ ပေါ့ ။
ပြိးတကယ်ပြသနာပေါ်လာတော့ အထက်က သိသွားလို့ နဲ့
ကြာတော့ မခံနိုင်တော့ဘဲ ပြေးကြရတာပါဘဲ ။
ဒါကြောင့်န.အ.ဖ အနေနဲ့sanction တွေကိုတကယ်ဘဲ
ပထမ ဆုံးက လွန်လွန်မင်းမင်း ဖြစ်နေတဲ့ အကြိးအကျယ်လတ်စားမှု ကို
( ကျနော်ကို..ဗိုလ်မှုးဇော်လင်း တို့ လာဆွေးနွေးတုံးက..ကျနော်က သူတို့ ကို နိုင်ငံရေးစိးပွားရေး အကြံပေးပါမယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်အတွက် နစ်ချက် ဖေါ်ဆောင်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ 
( ပထမ ) တချက်က..ငါးနစ်အတွင်း....
နေ့ စားအလုပ်သမားလုပ်ခ ကို အနိမ့်ဆုံး..
( ၃ -ဒေါ်လာ ) ဖြစ်လာအောင် ရည်မှန်းချက် ( တားဂတ် ) ထားရေး နုင့်
( ဒုတိယ ) နိုင်ငံတော်မှာ လွန်လွန်ကဲကဲ
လာပ်စားမှုတွေကို ထိမ်းသိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
သူတို့အခန်းအပြင်ထွက် ဖုံးဆက်တယ် ။
ပြိးတော့ လူကြိးက ခင်ဗျားအတွက် ဘာဖြစ်ချင်တယ် သာတောင်းပါတဲ့ ။
တိုင်းပြည်အရေးက သူတို့တာဝန်ပါပေါ့ ပြန်ပြောလာတယ် ။
ကျနော် ဗြောင်ဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။
ပထမ တချက်က ကျနော့်နိုင်ငံရေး..။
ရတယ် ။ မတောင်းဘဲထားလို့ ရတယ်
အိမ်ကိုသစ်နဲ့ ဆောက်ထားရင်..ခြတွေကို မရှင်းရင်...
အဲဒီအိမ်ဟာ....ပြင်ပ လေမုန်တိုင်း ဒါဏ်ကြောင့် ပြိုမှာထက်
ချစားလို့ပြိုကျမှာဘဲ လို့ ပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ် ။
( ၃ ) နိုင်ငံရေး သမားတွေကို
စိးပွားရေး လူမှုရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိတ်ထားတာတွေကို
ပထမဆုံး ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းပေးရပါမယ် ။
နောင် မပိတ်ပင်တော့ပါဘူး အာမခံချက် အရင်ပေးရပါမယ် ။ တဆက်ထဲ..ပတ်စပို့ လျှောက်ထားခြင်း..
နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းကြောင်း ခံဝန်ချက်ထိုးခိုင်းစေခြင်းကို လုံးဝ ရုတ်သိမ်းရပါမယ် ။
( ၄ ) နိုင်ငံတော်စိးပွားရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို...
ယခုပေါ်ပေါက်လာမဲ့ လွတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားရပါမယ် ။
၀န်ကြိးကက်ဘိနက် အဖွဲ့ ကသာ ချုပ်ကိုင်ထားမယ် ။
ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ဘေးချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်...
ပြည်သူတွေကို sanction လုပ်ထားတာမို့ ...
ကျေကျေလည်လည် ပြန်လည်စဉ်းစားရပါ လို့ အသိပေးလိုပါတယ် ။
( ၅ ) နိုင်ငံတော် စိးပွားရေးတိုးတက်လာဖို့ ဆိုရင်..
နိုင်ငံတော်သမတ သည် စစ်ရေးအမြင်ရှိသူဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့
ကန့် သတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမည် ။
ကနေ့စစ်ရေးအမြင်ရှိသူ သန်းရွှေ ဉ်းဆောင်နေတာ...
နိုင်ငံတော်မှာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေ တပုံတပင်ကြိး ရရှိသော်လည်း..
နိုင်ငံတော် စီပွားရေးတွင် စက်ရုံတွေဆောက်သော်လည်း
စီးပွားရေးအမြင် မရရှိတော့ ဘာစီမံကိန်းမှ မအောင်မြင်ပါ ။
ပိုဆိုးသည်က နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေတွေကို
နဲနဲသာသုံးပြိး စစ်ရေးတိုးချဲ့ မှုသာလုပ်ခဲ့တာ
လက်တွေ့ ဖြစ်နေပါတော့သည် ။
Yeyint Nge, Aung Zaw Bo, Maung Maung Wann and 31 others like this.
ဆရာရေ.. ကျနော်ကြားဖူးတဲ့ ဟာသလေးတခုပါ။ တခါတုန်းက ကွန်ဖရင့်တခုမျာ အမေရိကန်သမ္မတ၊ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ရုရှားသမ္မတတို့ဆုံကြတယ်တဲ့။ အမေရိကန်သမ္မတက သူ့နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုက တလကို ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ရှိတယ်။ သူတို့နေစရိတ် စားစရိတ် အသုံးစရိတ်က ၁လကို ၅၀၀လောက်ကုန်တယ်တဲ့။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာ ကျနော်မသိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလဲ သူ့နိုင်ငံမှာလဲ တလကို ပေါင် ၁၀၀၀ ကျော်လောက်ဝင်တယ်။ အသုံးစရိတ်က ၅၀၀ကျော်ကုန်တယ်။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုသုံးလဲ၊ လုပ်သလဲဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့။ ရုရှသမ္မတကလဲပြောတယ်။ သူ့နိုင်ငံမှာ တလကိုလူတယောက်က ၅၀၀လောက်ဝင်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ၁၀၀၀လောက်ရှိတယ်။ လိုတဲ့ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုရှာကြလဲမသိဘူးတဲ့.... ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရော...:PSee More
Tuesday at 7:39am • LikeUnlike •2peopleLoading...
နေရာတကာမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်း မကြံသောသူဟာ ယဉ်ကျေးတဲ.လူဖြစ်တရ်
နေရာတကာမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်း ကြံသူက မယဉ်ကျေးတဲ.လူဖြစ်တရ်..
ဒီ န.အ.ဖ တွေက နိုင်ငံတော်ရဲ.နောင်ရေးအတွက်တွေးတော မြော်မြင် ဆင်ခြင်တတ်တဲ. လူမှ မဟုတ်တာ...လူတစ်ရာမှာ တစ်ဆယ်လောက်သာရှိတဲ.
မိမိနိုင်...ငံရဲ. အမျိုးသားရေးကို ပူပင်ပြီး တာဝန်ယူတတ်တဲ. လူတော်လူကောင်းတွေကိုလည်း ဖမ်းထားလိုက်ကြတာပဲလေ ..
တိုင်းပြည်ကြီးပွါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော "တစ်ကရ်.သူရဲကောင်း"
လူစားမျိူးတွေ ကတော. ဘာက အရေးကြီးလဲဆိုတာ ................
လူသာ ပဓာနပဲ ...See More
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် အခုလို ဗြောင်သုံးသပ်ပြတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ် ။
တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီးရလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေ ဖြစ်လို့ကျွန်တော့ ဘလော့မှာ တင်ပြခွင့်ပေးပါ ။ဒေါက်တာရမ်းကုတွေ ဆေးကုနေတဲ့ တိုင်းပြည် ထဲကလူတွေ ကို သိစေချင်လို့ ပါ ။ http://htaytintn...l.blogspot.com/See More
Tuesday at 9:40am • LikeUnlike •2peopleLoading...
Aung Zaw Bo ဖုန်းနဲ့ကားပါမစ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဆောက်လို့ရနေပြီဆရာ.. အဲဒါတွေကိုသာ ပြည်သူ့အစုရှယ်ယာဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မမှန်မှု၊ မငြိမ်သက်မှုကြောင့် မီးအားမြှင့်စက်..အင်ဗက်တာ..safe guard၊ မီးစက်၊ ဆီဖိုး... စသည်ဖြင့်ဝယ်လိုက်ရတဲ့ အပိုသုံးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောက်လိုက်ရင်ရော.. ဘယ်လောက်အကျိုးရှိလိုက်မလဲ...
Tuesday at 10:09am • LikeUnlike
Billy Mackenzie ကိုဌေးတင့် ခင်ဗျာ ခင်ဗျားဘလောက်မှာ တင်ဖို့ .သတ်သတ်ပို့ ပေးပါမယ်...ကျနော်အိးမေးက (paapagyi@gmail.com ) ဆက်သွယ်ပေးပါလားခင်ဗျာ
Tuesday at 10:31am • LikeUnlike • 1 personLoading...
Daiwa Desai အမေစုကုန်သွယ်ခွင့်ကုမ္မဏီထောင်ဖို့ စိက်ကူးကတော့ကောင်းပါတယ် ဦးခင်ဗျား..အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရ..နိုင်ငံရေးအမြတ်မရှိနိုင်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်..
Tuesday at 10:38am • LikeUnlike
Zen Myat Lahpai ကျနော်ကိုလဲထောင်က လွှတ်စမှာ...နစ်ကြိမ်..နှမ်းတစေ့နဲ့ဆီမဖြစ်ပါဘူး...
မိသားစုတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာ ကြာပြီ...သူတို့ အလုပ်ချပေးမယ်..တနှစ်အတွင်းတိုက်ကြိးကားကြိးတွေနဲ့ဖြစ်လာစေရမယ်ပေါ့ ..တခြား အဖွဲ့ ချုပ်လူတွေကိုလဲ သိန်း..၅၀၀၀ -အထိအတိုးမဲ့ငွေချေးပေးမယ်..လုပ်ငန်းတွေချပေးမယ်..ဆွယ်လဲဆွယ်တယ်..ခြိမ်းလဲခြိမ်းခြောက်တာ တပုံတပင်ကြိးပါ ။
Tuesday at 12:52pm • LikeUnlike • 1 personLoading...
Zen Myat Lahpai ငယ်ငယ်တုန်းက သတင်းစာမှာနေ့တိုင်းပါတယ်လေ
ဘယ်မြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ်က ဘယ်နှစ်ယောက်ထွက်တယ် ဆိုတာ တာမျိုးပေးလို့လား
Tuesday at 12:53pm • LikeUnlike • 1 personLoading...
Zen Myat Lahpai အိမ်ဖေါ်အဖွားကြိးက ထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးဖြစ်နေတာကိုး..။ နောက် ကျနော်ထောင်ကျပြိး ကြာမှသီရတယ်
Zen Myat Lahpai အပိုင်း ၁ က ဘယ်မှာဖတ်ရမှာလဲ
Tuesday at 12:54pm • LikeUnlike
Billy Mackenzie ကျနေ်ာပြောသလိုပါဘဲ...လူအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြိး...မုန့် ကျွေးသင့်ရင်ကျွေးတယ် ။ မှားထားတာ မိထားရင် အဖွဲ့ ချုပ်ကနေထွက်မယ်ဆိုရင်...အမှုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ ။ တခုပြောပါမယ် ။ နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင် ( လူငယ် ) ရန်ကင်းမြို့ နယ်..ကို ရဲနောင်ဝင်း ( အသေအခြာမမှတ်မိတော့ ) ကိုဆို...သူကလဲဘာမှ မပြောဘဲ...လျှောက်ထားခြင်းလဲမရှိဘဲ..ပတ်စပို့ရယ်..ဂျပန်ဗွီဇာရယ်...လေယာဉ်လက်မှတ်ကအစ ဂျပန်အလုပ်ပါအပါအ၀င်...မတောင်းဘဲလာပေး...သွားဖို့ လာဆွယ်ပါတယ် ။
Tuesday at 1:35pm • LikeUnlike
Shein Waiyan Lin I want to read part1.Plz
Tuesday at 1:52pm • LikeUnlike
Kyaw Aye ဒီပို့စ်ကိုရေးသားတဲ့ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်နှင့်တင်ဆက်ပေးတဲ့ကိုမောင်မောင်ဝမ်းတို့ကိုအထူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးမသိသေးတာသိရတာကျေနပ်တဲ့အပြင်စစ်အစိုးရရဲ့ဆိုးသွမ်းယုတ်မာမှုအတွက်အများကြီးစာနာဂရုဏာသက်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကိုလည်းဖွင့်ချပါအုံးခင်ဗျာ။စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ကြိုက်လွန်းလို့ရှယ်ပါရစေခင်ဗျာ။
Tuesday at 3:24pm • LikeUnlike •2peopleLoading...
Sayar Gyi Jit ဆရာ့ note ကို လုံးဝကြိူက်ပါတယ်ဆရာ.. အထူးလေးစားလျက်..
Tuesday at 5:01pm • LikeUnlike
ရဲ တိုက် နီ ကိုမောင်ဝမ်း ခင်ဗျာ ဒီနေ့ ကျောင်းသားတွေ အပေါ် ရော ခင်ဗျား ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး
Tuesday at 5:25pm • LikeUnlike
Htay Tint စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုနဲ့လူ ၄သိန်းကျော် တပ်ကြီးကို ခေါင်းဆောင် ၄ သိန်းကျော် က ဥက္ကဌနဲ့အတွင်းရေးမှုး ရာထူးတွေနဲ့ကွန်ယက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တော့ မယ်ဗျ ။ ဥက္ကဌချုပ်ကြီး နဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ကြီး ရွေးပြီးရင် တိုက်ပွဲစမယ် ။ တနှစ်ခါလူစုပြီး သဘောထားတွေညှိနေတာ အနှစ်၂၀ ကျမှ ကွန်ယက်နဲ့ပူးပေါင်းဘို့ သဘောတူကြတယ် ။ဒါတောင် ကွန်ယက်မှာ လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်ဆွေးနွေးဖို့ အမြန်လုပ်ရင် စကားနိုင်လုနေတာနဲ့နောက်၁၀နှစ် ကြာမယ်ထင်တာဘဲ ။
Tuesday at 6:21pm • LikeUnlike •2people2 people like this.
ကျနော်ပြောခြင်တဲ့ Sanction အကြောင်း (အပိုင်း ၃) နိဂုံးပိုင်း ....
ရေးသားသူ - ဒေါက်တာ လှိုင်မြင့် .................
by San Maung on Friday, January 7, 2011 at 6:20am
ပထမ နစ်ပိုင်းကို လူတော်တော်များများ လက်ခံကြ နားလည်ပေးကြတဲ့အတွက် အားတက်မိသလို....စာရေးဖို့ အားပေး..တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့...ဆောင်းပါးကို ၀က်ဆိုဒ်ကြိးတွေဆီမှာတင်ပေး...ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာဖေါ်ပြပေးတဲ့...ကိုမောင်မောင်ဝမ်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ တိုင်းပြည်အတွက် တိုက်ပွဲကို ကျရာတာဝန်ကနေ ..အခွင့်သာသလို ပံ့ပိုးခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ ။
ကနေ့ ရေးမဲ့ ပါမစ်တွေကိစ္စ ရေးနေတုံးမှာတင်..Australia နိုင်ငံ Macquarie University က
ပါမောက္ခ Dr. Sean Turnell ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကနေ ပြည်တွင်းမိသားစုတွေဆီပြန်ပို ငွေ့ဟာ..ထိုင်းတနိုင်ငံထဲကနေတင်..တနစ်ကို ဒေါ်လာပေါင်း..သန်းငါးရာကျော်ရှိတယ်လို့လေ့လာချက် ထွက်လာပါတယ် ။
မလေးရှား...ဂျပန်..ဥရောပ နိုင်ငံအားလုံးက ပြန်ပို့ တဲ့ငွေတွေတွက်ကြည့်ရင်
တနစ်ကို မြန်မာတွေ ပြည်တွင်းကို ပြန်ပို့ ငွေဟာ...
စုစုပေါင်း ( နစ်စဉ် ) ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ( 1.5 billion ) ရှိနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီငွေတွေအားလုံးကို ဟွန်ဒီ နဲ့ ဘဲလွှဲနေပါတယ် ။
အဲဒါကို ပြည်ပရောက် စီပွားရေးပညာရှင်ကြိးတွေက
တခါတခါ ဝေဖန်ဆွေးနွေးတတ်ကြပါတယ် ။ ပြည့်စုံမှုတော့မရှိခဲ့ပါ ။
ဒီထက်ပိုတာက...ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း( မှောင်ခို )
ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေကြေးတွေကလဲ တနစ်တနစ်ကို မနည်းလှပါဘူး ။
သူတို့ လဲ ဟွန်ဒီပါဘဲ ။
သူတို့ ပါပေါင်း၇င် တနစ်ကို
ဒေါ်လာ ( နစ်ဘီလျှံ ) လောက် ငွေမဲကို ငွေဖြူလုပ်နေကြတာပါ ။
ဘယ်လိုလုပ် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲပေးနိုင်နေကြတာလဲ
ဆိုတာကို ထိုပညာရှင်ကြိးတွေ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ မပါထားသလို...
ဘာလို့ မစဉ်းစားကြတာလဲ မေးချင်လာပါတယ် ။
ဘာလို့ မဆွေးနွေကြရတာပါလဲ သိချင်လာပါတယ် ။
သူတို့ က ပိုသိမှီသူတွေဆိုတော့ သူတို့ ဘယ်လိုပြောမယ်တော့ ကျနော်မသိပါ ကျနော်ကြားဖူးထားတာ..
သိထားတာလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။
တကယ်တော့ ဒီလောက်ပမာဏကြိးမားတဲ့ငွေလွှဲ လုပ်ငန်းဟာ..အမေရိကန်အစိုးရသိရင်..လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်မထင်ပါဘူး ။
ဒါအင်မတန်ကြိးမားတဲ့ ငွေမဲခ၀ါချမှုကြိးဖြစ်နေလို့ ပါ ။
အဲဒီငွေမဲ ကိုငွေဖြူဖြစ်အောင် ခ၀ါချမှုကြိးကို
ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့အားလုံး အားပေးမိလျှက်ဖြစ်နေကြပါတယ် ။
အဲဒီခ၀ါချမှုကြိးဟာ..သန်းရွှေ နဲ့ကြိုင်ကြိုင်တို့ခိုးထားတဲ့ 
ပါမစ်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကို ကျစ်ယူထားတာကို..ဒေါ်လာလဲပေးရုံမက...
အဲဒီဒေါ်လာတွေကို..စင်ကာပူအရောက် ပို့ ပေးနေမိလျှက်သား ...ကို မသိဘဲ ကူပေးမိလျှက်သားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ..
ဘယ်သူတွေ စဉ်းစာမိကြပါသလဲ ။
အတိုက်အခံတွေကသန်းရွှေကို သူခိုးကြိးလို့ တော့
ပြိးကိုယ်တိုင်ကသူခိုးနေတာကို ၀ိုင်း ကူညီနေမိကြတာကို..
ရင်နာတာ မဖြစ်ကြပါနဲ့။
ကျနော်အရင်ကထဲက တချို့အသံလွှင့်ဌာနကြိးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆီ ဖြန့် ခဲ့ပါတယ် ။
အ၀ါက ဘာသာ၊ သာသနာ၊
အစိမ်းက ငါ့ရဲ့ အသုံးချ စတေးခံ သားသတ် စစ်တပ်၊
အနီက လူထုသွေး ....
ဒီ အားလုံး အပေါ်က ဖိနင်းနေတဲ့
ကြယ်ဖြူကြီးက ငါပဲပေါ့ကွာ...ငှဲငှဲငှဲ .မပိုင်လား .. :D
ပုံ/ ငတက်ပြားချုပ်ကြီး (အဲ မှားလို့) တပ်ချုပ်ကြီး
အားလုံးဟာ..စင်ကာပူကိုဘဲ ရောက်ပါတယ် ။
စင်ကာပူမှာ....တေဇ အဆက်အသွယ်လူတွေဆီကိုဘဲရောက်ပါတယ် ။
တေဇက စင်ကာပူရောက်လာတဲ့ ဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးကို...
အဲဒီမှာတင် .နိုင်ငံတကာ ဘဏ်တွေမှာဘဲ
မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပြန်မပို့ ပါဘူး ။
ဟာဒါဆို တနစ်ကို..နစ်ဘီလျှံလောက်ငွေ..မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ 
( သိန်းပေါင်း )နစ်ကုဋေ ဆိုတဲ့
ဟုတ်ကဲ့ ...ကားပါမစ်..ဖု့းပါမစ်..ပါမစ်တွေကနေ သူတို့ ရထားတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေကလဲ...
ကျပ်ငွေ(.သိန်း )ပေါင်း.နစ်.ကုဋေ မကရှိထားတယ်လေ ။
သူတို့ ရထားတဲ့ အလွန်များပြားလှတဲ့မြန်မာငွေ တွေကို
ခင်ဗျားတို့ ..ကျနော်တို့က ဒေါ်လာတွေ
တေဇ လူတွလက်ထဲလွှဲပေးနေမိကြတယ်လေ ။
သူတို့( န.အ.ဖ ) လက်ထဲဒေါ်လာတွေ
ပိုလျှံနေအောင်ဝင်လာလို့ နဲ့လိမ်ထားပါသေးတယ် ။
တကယ်က အခုဆိုရင်ဖုံးဆိုတာ ပါမစ်စံနစ်မရှိတော့ဘူး....
အခြားနိမ်း ( ငြောင်းပြီ )..
အဲဒီတော့ သူတို့ ပြန်အမ်းနိုင်တဲ့ မြန်မာငွေ လက်ထဲနည်းသွားပြီ ။
ရှင်းရှင်းလေး.....န.အ.ဖ အနေနဲ့ တရားဝင်ပို့ ကုန်ကရတဲ့ငွေ
( ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းရတဲ့ငွေတွေ...ကျောက်မျက်ရောင်းရတဲ့ငွေတွေကို...
မှောင်ခိုဈေးကွက်ထဲ ဘယ်တုံးက ထဲ့ဘူးလို့ လဲ ) ။
သူတို့ ကတောင် အရင်တုံးက ဒေါ်လာငွေလိုနေလို့ တဖက်လှဲ့ နဲ့ တောင် ၀ယ်ဘူးတာတွေရှိကြပါတယ် ။
( ဒေါ်လာတွေ ) ဘယ်တုံ့းက မှောင်ခိုဈေးကွက်ထဲ..၀င်လာဖူးလို့ လဲ ။
လိမ်တဲ့သူ က လိမ်နေကြ..
ဒါသူတို့ အလုပ်... လူလိမ်တွေက ရသလိုလိမ်မှာဘဲ...။
ယုံတဲ့သူက ..ထမင်းစားတဲ့ဥိးဏှောဏ်နဲ့ 
ချင့်ချိန်ပြိ်း ယုံကြပါလို့ ဘဲပြောချင်ပါတယ် ။
ရှင်းရှင်းလေး..ပါမစ်နဲ့ ဝိုက်ထားတဲ့ငွေတွေ ခန်းသွားလို့ ....
ပြန်အမ်းပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေပမာဏ နည်းသွားလို့ 
မြန်မာငွေ ဈေးပြန်တက်လာတာပါ ဘာမှစီးပွားရေးခိုင်မာလာလို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
စီးပွာေးရေး လက်ဝါးကြိးအုပ်ထားတာ မလွှဲသာဘဲ လျှော့လိုက်ရလို့ ..
ဒေါ်လာဈေး ပြန်အပြောင်းဘက်လျှဲ့ လာတာပါ ။
နယ်စပ်တွေဘာတွေ က နဲနဲ သာ ရှိတာပါ ။
( ဘိန်းဖို့းပေးချေငွေတွေ လှိမ့်ဝင်လာချိန်...
နှစ်တိုင်း..ဒီအချိန်ဆို ဒေါ်လာဈေးကျတတ်ပါတယ် ။
ဒေါ်လာကုန်သည်တိုင်း ဒီအချိန်ဆို ဒေါ်လာထုတ်ရောင်း..
ဘိန်းရာသီ ဒေါ်လာဈေးကျတဲ့..( graph )ဂရပ်ရှိပါတယ် ။
နစ်စဉ်..၁၅ -ကနေ ၂၀ % လောက်အတက်အကျရှိတတ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့အခုကျတာက....၃၀ % အထက်ဖြစ်နေတယ် ။
ကျချိန်က နဲနဲစောနေတယ် ။ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ။
နစ်စဉ် မတ်လဆန်းတို ပြန်တက်လာပါတယ် ။
နောက် နိုင်ငံတော်က ( န.အ.ဖ ) က ကုန်ဈေးနုံးတွေ ရံဖန်ရံခါ တက်လာရင်...
သတင်းစာခေါင်းကြိးပိုင်းတွေနဲ့ အပြစ်တင် ..
သူတို့ ကျတော့သူတော်ကောင်းတွေလိုလို..လုပ်တယ် ။
ကားတွေကို ပါမစ်တွေနဲ့ မတရားခေါင်ခိုက်အောင် ဈေးတင်...
( မတင်သင့်တာကိုကျတင်ပြိး )
ဒါငတေမာပြိးရောစိတ်ထက်ကို ယုတ်ညံ့ပါတယ် ။
ဒါပြည်သူတွေကို..sanction ပါဘဲ ။
တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေကို ပြည်သူတွေ ကို မပေးဘဲ..ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံကိုပေးတာကတော့..
သူခိုးဓါးရိုးကမ်းတဲ့..ဧရာမ sanction ကြိးပါဘဲ ။
ဈေးကြိးပေးပြိး..( ပြန် ) ၀ယ်သုံးနေရပါတယ် ။
နောက် အသားလွတ် sanction တခု ထပ်ပြောပါမယ် ။
ကျနော် ဒါကို ပြည်ပစိးပွားရေးပညာရှင်ကြိးတချို့ နဲ့ 
အသံလွှင့်ဌာနကြိးတချို့ ဆီကို အကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့ ဖူးပါတယ် ။
ဆရာသမားကြိးများ ( အာစရိယ ကြိးများက ) အလေးတောင်မပေးကြပါ ။
ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်လေလို့ လား...
သူ့ တို့ စဉ်းစား တွက်ချက်တဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အလုပ်သမားတွေ
အသားလွတ်ဖြတ်အရိတ်ခံနေရတာ..အလေးမထားလို့ လား.. ။
ကြိုင်ကြိုင် စားခွက် ထိခိုက်သွားမှာ စိုးကြလို့ လားမသိ...။
ကျနော် ၂၀၀၂ -ကုန်မှာထောင်ကလွတ်ပါတယ် ။
ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှုးချုပ်ကိုကျော်သိန်းက ဆွမ်းကျွေးဖိတ်ပါတယ် ။
( ခင်ဗျား..ဘဏ်တွေကနေငွေတွေထုတ်ခိုင်းနေတာ ဘာလို့လဲမေးပါတယ် ) ...
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်က အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ..ညီအကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကို
ငွေတွေထုတ်..ရွှေ သို့ မဟုတ် ဒေါ်လာကိုင်ထားကြ တိုက်တွန်းပါတယ် ။
( ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ် ကျနော် မိသားစုတွေရဲ့ ငွေဟာ
ကျနော်ငွေလို့ သဘောထားလို့ ..ပြိး အပြင်လူ
ဘယ်သူ ကိုမှ မပြောတဲ့အကြောင်း ) ရှင်းပြပါတယ် ။
သူ့ ကိုလဲ တဆက်ထဲ..
( ခင်ဗျား ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် ကို ဘဏ်တွေ..ကွဲတော့မယ်ဆိုတာ တင်ပြပါလားဆိုတော့. )
( ကိုလှိုင်မြင့်..ကျနော်တို့ ကကွဲမယ်ထင်တာမပြောနဲ့ 
ကွဲဖို့ သေခြာရင်တောင် တင်ပြခွင့်မရှိပါဘူး ။
အမြင်တင်ပြရင် နားကားသွားမယ်တဲ့ ။
ဖြစ်ပျက်တာဘဲ ရီပို့ လုပ်ရတာပါတဲ့ )
ကျနော်လိုဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် ကလဲ..
ကျနော်တိုက န.အ.ဖ ဆိုပေမဲ့...
တကယ်က တခေါင်းထဲ ကချုပ်ကိုင်ထားတာ...
ကျနော်တို့ ( န.အ.ဖ ဆိုတာကတတွေက )
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂ -ရက်နေ့ မှာ...သူနဲ့ ပြောခဲ့တာ....
နောက် တပတ်အကြာ...ဖေဖေါ်ဝါရီ..( ၁၀ ) ရက်နော့ မှာ
ခင်ညွှန့် အမိန့် နဲ့ဘဏ်တွေ ပိတ်လိုက်ရပါတယ် ။
ကြိုင်ကြိုင် နဲ့ မောင်အေးတို့ မိသားစုတွေ အသားလွတ် ရိတ်စားနေကြပါတယ် ။
ဒီလောက် မသေရုံတမယ် ဆင်းဆင်းရဲရဲလုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့
လုယက်ယူရက်တာ အံ့ပါရဲ့ ဗျာ ။
သူခိုးဆိုတာ နေ့ တိုင်းမခိုးကြဘူး ။
ပြိးတကယ့်အချီကြိး ဂွင်ကြိးကြိးကျမှခိုးကြတာ ။
( ဘယ်တော့မှ မခိုးကြပါဘူး )
သူခိုးဆိုတဲ့သူတွေမှာ..သူခိုးစည်း..ဓါးမြစည်းဆိုတာ ရှိကြပါတယ် ။
သူတို့ က ကုသိုလ်ယူရင်းပြန်တောင်
သူတို့ ထက်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကူညီတတ်ကြတယ် ။
သူခိုးဆိုပေမဲ့ လူကြိးလူကောင်းစိတ် မပျောက်သွားသေးဘူး ။
အခု ကြိုင်ကြိုင်တို့ က သူခိုးတွေ ဓါးမြတွေ ထက်ကို
သူတို့ ကိုအာဏာနဲ့လက်အုပ်ချီခိုင်းတာ..ကျနော်ရင်အနာဆုံးပါ ။
ကျနော်သာ အကျပ်ကိုင်ပြိး လက်အုပ်ချီရမယ်ဆို..
ရင်ကော့ လက်ပိုက်ထားလိုက်ပါမယ် ။
ထောင်ထဲမှာ.နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ က ( ပုံစံ )ခေါ်ရင် ထိုင်မပေးခဲ့ကြဖို့ 
တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူတွေကို ကျနော် ဒီနေရာကနေ ( ဥိးညွှတ်အလေးပြုပါတယ် ) ။
သူတို့ က စက္ကန့် မလပ် အချိန်ပြည့်ခိုးနေကြတာ ကိုယ်ထက်နိမ့်သူလဲ..
ငတ်လို့ သေချင်သေ..တပြားရလဲ....နိုက်တာဘဲ ။
အဲဒီတပြားတွေ များလိုက်ရင် ကုဋေ ကုဌာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြိး..ယူရက်ကြတယ် ။
သူခိုးက သူစားဖို့ လောက်သာ ခိုးတာ ။
သူတို့ က စိန်တွေ အကြိးကြိးတွေဝတ်ဖို့ ..
ခိုးထားတာလဲထားစရာနေရာမရှိတော့လောက်အောင် များနေပြီ ။
တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေက..ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ ကြပါတယ် ။
ပို့ ပြိးရင်..နိုင်ငံခြားက ၀ယ်သူပေးချေတဲ့ဒေါ်လာကို
နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာ ဘဏ်စာရင်းကို...ဒေါ်လာနဲ့ စာရင်းဖွင့်ထားလို့ ရပါတယ်
ပြည်တွင်းမှာထုတ်သုံ့းချင်ရင်တော့ ( F.E.C ) နဲ့ဘဲပေးပါတယ် ။
အဲဒီဒေါ်လာကို နိုင်ငံခြားကိုလွှဲပေးလို့ ရပါတယ် ။
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်ကတော့..ပို့ ကုန်မဟုတ်ဘူး ။
ကန်ထရိုက်အလိုက် နိုင်ငံခြား အထည်( အချုပ် ) အပ်သူဆီက
လုပ်အားခ ( ချုပ်လုပ်ခ ) ကိုဘဲယူကြရတာလေ ။
အဲဒီမှာ ကြိုင်ကြိုင်တို့ က ပါဝါကိုင်ပြီး...
လက်တလုံးခြားနဲ့လုပ်အားခတွေကို ရိတ်တော့တာဘဲ ။ ဘယ်လိုရိတ်သလဲဆိုရင်..
( ရှင်းအောင်..သေသေခြာခြာ ဖတ်စေချင်ပါတယ် ) ။
နိင်ငံခြားအထည်အပ်သူဆီကနေ ချုပ်လုပ်ခ ( လုပ်အားခ ) ကိုပေးခြေလာရင်..
သူတို့ က ရန်ကုန်ကနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကိုငွေပေးချေရပါတယ် ။
ဒေါ်လာကို ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခွင့်မရကြပါဘူး ။
နိုင်ငံခြားဘဏ်ကနေ..ငွေစာရင်း ( F.E.C ) ချလန်လေးဘဲပေးပါတယ် ။
ဘဏ်မှာ ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါဘူး ။
အဲဒီစာရွက်ကို..( သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ ..ကုန်သည်လမ်းဒေါင့်မှာရှိတဲ့ ) F.E.C ရုံးဆိုတာရှိပါတယ် ။
အလဲကောင်တာမှာ သွားလဲလှယ်ကြရပါတယ် ။
အဲဒီမှာ...ကောင်တာ ( ၂၀ ) လောက်ရှိပါတယ် ။ ကောင်တာတွေထဲမှာ
မောင်အေးသမိးပိုင်တခု ရှိပါတယ် ။
အခုနက အထည်ချုပ်ပိုင်ရှင်ဟာ သူရလာတဲ့ ချလန်ကို.....
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ က ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်း......
နောက်တခေါက်..မောင်အေး...ဒီလို ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ( ဥပမာ ပေါ့ ) လုပ်အားခ ဒေါ်လာ နစ်သန်းဖိုး ထုတ်တယ်ပေါ့ ။
F.E.C ရဲ့ ပြင်ပပေါက်ဈေး.( ၁၀၀၀)၀န်းကျင်နဲ့ လဲလှယ်ပေးပါတယ် ။
အဲဒီမှာလဲ...တကယ့်ပေါက်ဈေးထက် နည်းတဲ့ဈေးနဲ့ ဘဲလဲပေးတာပါဘဲ ။
ဘာမှအကွန့် မတက်ရဲကြပါဘူး ။ ။
အကောက်ခွန်ဌာန ရဲ့ ပေါက်ဈေး ( ၄၅၀ ကျပ်နုံး )......
(ဒီဈေးကလဲ..၉၆ ..ဇူလိုင်မှာ ကျနော်ဆီက ဥိးကြည်မောင်အတွက်ရေးထားတာမိပြိး..
တလအကြာ ..၉၆- ဇူလိုင်လက....စတင် ကျင့်သုံ့းတာပါ ) နဲ့ ဘဲ လဲပေးပါတယ် ။
ဒေါ်လာနစ်သန်းဟာ...US ဒေါ်လာနဲ့ ရတဲ့အတိုင်းသာ..
ကျပ်ငွေ....သန်း၂၅၀၀ လောက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ငွေရပါမယ် ။
အခုတော့ FEC နဲ့ လဲရသေးတယ် ။
ပထမ ဒေါ်လာတသန်းအတွက်က..ကျပ်ငွေ သန်း ( ၁၀၀၀ ) ဘဲရရှာပါတယ် ။
ဒုတိယတစ်သန်းအတွက်ကျတော့....ကျပ်ငွေ သန်း ( ၄၅၀ ) ဘဲရပါတော့တယ် ။
နစ်ခုပေါင်းဆို..ကျပ်ငွေ..သန်း..၁၄၅၀ ဘဲရပါတော့တယ် ။
သူတို့ ပါးစပ်ထဲရောက်မဲ့ ငွေတွေကို ..
အလွန်ဆင်းရဲရှာနေတဲ့...ကြိုင်ကြိုင်က ဖြတ်စား..အုပ်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ဒေါ်လာနဲ တွက်ရင်..လုပ်အားခ ဒေါ်လာ နစ်သန်း ရှိတိုင်း...
န.အ.ဖ က FEC နဲ့လဲပေးတာကိုက တခါနာပြန် ။ ဒီထက်ဆိုးတာက ကြိုင်ကြိုင်တို့ က..ဖြတ်စားတာက...
နစ်သန်းထဲကနေ...( ဒေါ်လာ ငါးသိန်း ) လောက် ဖြတ်ဝိုက်ထားပါတယ် ။
သန်း ( ၄၀၀ ) နိးပါးရနေတော့..ကြိုင်ကြိုင်တို့ ..
တနစ်တနစ်ကို အထည်ချုပ်သမလေးတွေ ပါးစပ်ပေါက်ကနေ
ခိုးစားနေတာ..ဒေါ်လာနဲ့...နစ်စဉ်..ဒေါ်လာ သန်းတရာ ( 100.million ) ရိတ်စားနေတာဟာ..
sanction ထက်ကိုဆိုးဝါးနေပါတယ် ။
အရာရှိကြိးတဥိးရဲ့ရင်ဖွင့်ချက်ပါခင်ဗျာ ။
နံမည်တော့ မထုတ်ဖေါ်ပါရစေနဲ့ ခင်ဗျာ ။
ဒီလိုမတရားယူနေတာဟာ...ယုတ်မာပက်စက်မှုဆိုတာ အင်မတန်ထင်ရှားနေပါတယ် ။
နောက်တက်လာမဲ့ လွှတ်တော်မှာ အမတ်မင်များကို ဒီကိစ္စ စုံစမ်းပြိး...
ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်းရေးတောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြရပါမယ် ။
အိန္ဒိယ သမတကြိးပေးလိုက်တဲ့..လူမှုပြစ်ချက် ( ရ ပါး ) ထဲက ထိပ်ဆုံးက...
WEALTH WITHOUT WORK ( www.khoe ) ..
လုပ်အားမရှိဘဲ ကြွယ်ဝမှု ဆိုတာ ဒါမျိုးပါဘဲ ခင်ဗျာ ။
လူမှုပြစ်မှု ၀ကိဆိုဒ်ပါဘဲ ။
SANCTION ကိုဘယ်သူက စတင်လုပ်ခဲ့တာကတော့ ရှင်းပါတယ် ။
အခု SANCTION ကိုရုတ်သိမ်းဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုး
တကယ်မျှော်ကိုးတယ် ဆိုရင် န.အ.ဖ ဟာ ကိုယ်စတင်ခဲ့တာကို
ပထမ ( အရင် ) ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးရပါမယ် ။
တရားဝင်လဲ ကျေညာပေးရပါမယ် ။
ပြိးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဝေဖန်ပါ ။
သူမရဲ့သြဇာ..တာဝန်ခံနိုင်မှု ကို ပေးထားရပါမယ် ။
ဗလိုင်းချည်းအော်နေရုံနဲ့သဘာဝမကျပါဘူး ။
ဥိးဏှောဏ်ရှိရှိ ပြောကြဆိုကြပါ ။
သမတက ထင်သလို စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတဲ့ ၀န်ကြိးတွေနဲ့ 
ကက်ဘိနက်ဖွဲ့ထင်သလို ကျဲကြမယ်ဆိုရင်.....
အာဏာပြန်သိမ်းဖို့ သာ အမိန့် စာထုတ်ထားလိုက်ပါ ကနေ့ လူငယ်တွေကို..
အူကြောင်ကြားလုပ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ ဘဲပြောပါမယ် ။ ကနေ့ လူငယ်တွေကို...
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ထိန်းလို့ ရကောင်းရပါမယ် ။
လွှတ်တော်နဲ့မလှိမ့်တပတ် ထိန်းလို့ ရမယ်ထင်ထားရင်...
နောက် ဥိးခင်မောင်ဆွေတို့ လို..
အဖွဲ့ ချုပ်ကလူတွေကို စိးပွားရေးလုပ်ခွင့်တွေ
ဒီရေကနေ ( ဧရာဝတီတိုင်း နဲ့ရခိုင် ) ထုတ်ပေးဖို့ ...
ကျနော် က အဲဒီအတိုက်အခံအဖွဲ့ ကို
နည်းလမ်းမျှဝေဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါတယ် ။
န.အ.ဖ ကသာ စေတနာမှန် ပြမယ်ဆိုရင်....
တနိုင်ငံလုံး..ကျေးရွာအားလုံးကို မိးလင်းစေရပါမယ် ။
န.အ.ဖ ပေါ်မှာဘဲ မူတည်နေပါတယ် ။ နောက် သဘာဝဇီဝလောင်စာကို
ဗေဒင်ယတြာ အနေနဲ့ လုပ်တာဆိုရင်တော့ မဝေဖန်လိုပါ ။
တကယ့် အကျိုးအမြတ်ရချင်လို့ ဆိုရင်တော့...အီန္ဒိယမှာ..
( BP ) ကုမ္မဏိဟာ...၂၀၀၂ နစ်မှာ ဒေါ်လာ သန်း၇၀ ဖိုး စမ်းသပ်ပါတယ် ။
ဒေါ်လာ သန်း ( ၂၀၀ ) ဖိုးအစမ်းလုပ်လိုက်တာ ၀က်ဝက်ကွဲရှုံးသွားပါတယ် ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဇီဝလောင်စာ လုပ်ရမဲ့စီမံကိန်းသီးနှံ ရှိပါတယ် ။
လူပေါင်း သန်းနဲ့ချီ အလုပ်ပေးထားနိုင်သလို...
နိုင်ငံခြားကပါ လာရေက်ရင်းနှိကြပါမယ် ။ ( ဘာလဲ ) ဆိုတာတော့....
ဖြေဖို့ အဆင်သင့်ပါ ။
နိုင်ငံခြားကထုတ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ အကိုးအကားနဲ့ ချပြပေးပါမယ် ။
ဘာမှလဲ သိပ်အရင်းအနှိးကြိးကြိးမလိုအပ်ပါဘူး ။
ခင်ဗျားတို့ မှာလဲ ဥိးဏှောဏ်ကောင်းတွေရှိပါတယ် ။
ခိုးဖို့ ..အထက်ကပ်ဖို့ လတ်ထိုးရာထူးတက်ဖို့ ဘဲ စဉ်စားနေကြတာတွေ ရပ်တန်းပြိး
တီထွင်ကြံဆကြံဆကြပါအု့းဘဲ ပြောလိုပါတယ် ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော် တကယ်ကြုံခဲ့ နားလည်ခဲ့တဲ့ဥပမာလေးကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါင်းကော..
န.အ.ဖ ကိုပါမျှဝေလိုပါတယ် ။ တခြားမဟုတ်ပါဘူး...မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ 
အာဏာလက်နက်ကို ကိုင်စရာမလိုပါဘူးဘဲပြောချင်ပါတယ် ။
လှည်ကူးမြို့ နယ် ငါးဆူတောင်ကျေးရွာမှာ....
ကြော်ငြာထဲပါလို့ ငှားပါတယ် ။
ပထမနေ့ အိုကေပေါ့ ။
ပိုင်ရှင်က ၀မ်းပမ်းတသာ..နောက်နေ့စာချုပ်ဖို့ သွားရင်..
( အမက..အမေက...ပြန်လာပြိး နေမှာမို့) နဲ့ 
အကြောင်းပြ ဖျက်ပါတော့တယ် ။
တအိမ်ဆို စရံပါပြန်လျှော်ရှာပါတယ် ။
သူများဆီက မသထာဘဲရတဲ့ငွေ မျိုးကိုကြောက်တယ် ။
နောက်ရက်တွေမှာလဲ ကြော်ငြာတွေထဲ ထဲ့ထားပါတယ် ။
သူတို့ လို အတ္တစိတ်ထားရင်
ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ အခန်းတောင် ငှားမရအောင်ယုတ်မာပါတော့တယ် ။
အဲဒီမှာ ငါးဆူတောင်ဒေသ သွားပြိး ၀က်မွေးပါတယ် ။
မိတ်ဆွေတွေ...ယောက္မခတွေက ၀က်အထိးမွေး ( အသားတိုမွေး ) ပြိး
၀က်သတ်သမားဆီရောင်းဖို့ဘဲ အတင်းတိုက်တွန်းကြပါတယ် ။
ကျနော်က ၀က်မကြာခဏမွေးဖူးပါတယ် ။
ကျနော် ၀က်အသားတိုးမွေးတာ စိတ်တော်တော်ထိခိုက်လို့ပါ ။
အဲဒီတော့ အမ ဘဲမွေးပါတယ် ။
သူတို့ က အမတွေက ၀က်ပေါက်ရင်..၁၂ ကောက်ပေါက်ရင်..
စေတနာနဲ့ တားကြပါတယ် ။
ကိုဝင်းမြင့်ဆိုသူ ( တရုတ်လူမျိုး ) မှာ ၀က်သားဖေါက်ခြံရှိပါတယ် ။
အကောင် တရာကျော်မွေးထားသူပါ ။
သူကလဲ စေတနာနဲ့ဝက်မ- မမွေးဖို့ တားပါတယ် ။
တခါ နစ်ရပ်ကွက် ( ရပ်ကွက်-၂ ) ဘက်မှာ...
တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေမွေးထားတဲ့ ဧရာမ ခြံကြိးရှိပါတယ် ။
လူစိမ်းတွေ ၀င်ကြည့်ချွင့်မရှိပါ ။
ကျနော်က ကိုဝင်းမြင့်အကူနဲ့ဝင်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
သူတို့ က တရုတ်စာအုပ်ကြိးတွေနဲ့ ..
တိုင်ဝမ်က သင်တန်းဆင်းလားသူတွေလို့ ဆိုပါတယ် ။
ကျနော် ၀က်မတွေ ဘဲ မွေးပါတယ် ။
သူတို့ အားလုံး ကျနော်ကိုလာပြိး
ကျနော်ဝက်မကြိးတကောင်က..နို့ တိုင် ( ၁၄ ) တိုင်ပါပါတယ်..
ပေါက်တော့..( ၁၅ ) ကောင်ပါ ။
နစ်လနေတော့ အဲဒီ ( ၁၅ ) ကောင်းစလုံးရှင်တယ် ။
သန်မာတာလဲ ..အားလုံးက တဆိုဒ်ထဲ ။
နို့ တိုင် ( ၁၂ ) တိုင်..ပေါက်တော့ ( ၁၃ ) ကောင်...
( ၁၃ ) ကောင်စလုံးရှင်တယ် ။
လက်တွေ့ လိုက်ပြလိုက်ပါတယ် ။
သူတို့ တွေဟာ တိုင်ဝမ်သင်တန်းဆင်းတွေ
လူလို ခံစားချက်..စိတ် ကို ထဲ့မစဉ်းစားကြပါဘူး ။
တိရိဆန် ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို
ထဲ့တွက်စရာမလိုလို့တွက်ထားကြသူတွေပါ ။
ကျနော် ၀က်မကြိးတွေ.. ကိုယ်ဝန်ရင့်မာနေချိန်မှာ....
မုံလာဥ..ကဇွနါ်းရွက်လေးကိုပါးစပ်ပေါက်အထိ ခွန့် ကျွှေးပါတယ် ။
ကြင်ကြင်နာနာ ယုယုယယ ပြုစုပေးပါတယ် ။
သမိးကြိး သမိးလေး နဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ ခေါ်ဆိုပါတယ် ။
၀က်မကြိးသားပေါက်ချိန် လူက ၀င်ကူပေးရပါတယ် ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က တခြားသူ..ကို အ၀င်မခံဘဲ
တယောက်ထဲ ၀က်မကြိးကို ကိုင်ပါတယ် ၀က်မကြိးဆိုတာ...
သူ့ ကလေးကို သူစိတ်အချရဆုံးလူနဲ့ ဆို..
အသာတကြည့် လက်ခံတယ် ။
( ဂေါ..ဂေါနဲ့) ရုံးထတော့တာ..မိခင်မေတ္တာလေ ။
သန်းရွှေမြေးလေးကို ငယ်ငယ်က ဗိုလ်မှုးတွေ ဗိုလ်ကြိးတွေ ထိမ်းကြရပါတယ် ။
ဒီကောင်လေး မှောက်လဲလို့ဒူးကွဲရင်..မှာကို..
အဲဒီဗိုလ်မှုးတွေ သေမလောက် ပူပန်ကြရတာ ။
သူတို့ ကို ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော်က မေးထားလို့ ..
သူတို့ရင်ဖွင့်တာတွေပါ ။
အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ဟော..တကောင် ဟောတကောင်..မွေးလိုက်တာ..
သူလဲမပင်ပန်း...ပြိးနို့ တွေ တိုက်တော့တာပါဘဲ ။
သူ စိတ်မပူပင်ရ..သားဇောနဲ့ဒေါသမထွက်ရတော့..
နို့ ထွက်ကလဲကောင်းတော့ ၀က်သားလေးတွေ
လုံးတစ် ၀တိုနေကြတော့တာပါဘဲ ။
အားလုံး တဆိုဒ်ထဲ ရဖို့ ဆိုတာ ၀က်မွေးဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ကိုဝင်းမြင့်ကို သူခြံမှာဝက်ပေါက်တော့ ခေါ်သွားပါတယ် ။
သူကလဲဝက်ပေါက်ရင် ကိုယ်တိုင် စီမံချင်တာလေ ။
အဲ သူက ၀က်ကို မွေးတာ စိးပွားရေးတွက်မွေးတာ ။
၀က်တွေအပေါ် ခင်မင်စိတ်ထားရမှန်းမသိဘူးလေ ။
လူကိုပေတယ် စင်ကျန်ကုန်တတ်တယ်လေ ။
အဲဒီအခါသူက ၀က်တွေကို ရိုက်..
မိခင်ဇော..သားဇော နဲ့ ကျတော့ ၀က်မကြိးက
သူ့ ကို ရက်စက်သလို...
သူ့ သားလေးတွေကို ချတော့မယ် တွက်ထားပြိးလေ ။
အဆိုးဆုံးက ကိုဝင်းမြင့်အသံကြားတာနဲ့
၀က်မကြိးတကောင်ကဆို ခြံခုန်ထွက် လိုက်တော့တာ ။
နောက်တော့ သူတို့ ကျနော်နည်းကို ကျင့်သုံးလာပါတော့တယ် ။
နောက် ကျနော် ထိုင်းဘက်ထွက်ခါနီးတော့
ကျနော် ၀ကိမကြိး နစ်ကောင်ကို ( မွေးစားညီ ) ကိုပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူကလဲ လက်ကြမ်းတော့ အဲဒီဝက်မကြိးကလေးတွေ မွေးအပြိး
၀က်မကြိးက နို့ မချပေးလို့ ..၀က်ကလေးတွေ ..တပတ်အတွင်း အကုန်သေကုန်ပါတယ် ။
၀က်မကြိးက တခြားတိရိဆန် နဲ့ ကွာတာက...
၀က်ကလေးတွေဟာ..သူတို့တခါစို့ ဘူးတဲ့ နို့ တိုင်ကို..
( အသေ ) မှတ်ထားပါတယ် ။
အခြားတကောင်က သူနို့ တိုင်ကို ဥိးထားရင်အတင်းအော်နေတော့တာ ။
အဲဒါဆို ၀က်မကြိးက နို့ ကို လုံးဝချမပေးပါဘူး ။
အားလုံး ကိုယ့်နို့ တိုင်ကို နေ၇ာမှန်ရသွားရင်..
၀က်ကလေးတွေအော်သံက ပြောင်းသွားပါတယ် ။
အဲဒီကျမှ ၀က်မကြိးက..( ဂူး ဂူး ) အသံပြိုပြိးနို့ ချပေးပါတယ် ။
၀က်ကလေးတွေလဲ...တပြွှတ်ပြွှတ်နဲ့ စို့ကြရပါတယ် ။
အဲဒီလိုဘဲ သူ စိတ် မချရင်..မလုံခြုံဘူး
ခံစားရရင် နို့ မချတော့တာပါဘဲ ။
၀က်ကလေးတွေ ကြိုက်သလောက်စို့ 
သူကချမပေးရင် တစက်မှ မကျပါဘူး ။
န.အ.ဖ ကို ပြောလိုပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ..( ထေရ၀ါဒ ) အထွန်းကားဆုံး နိုင်ငံပါ ။
ထေရ၀ါဒ ဟာ မေတ္တာတရားပေါ်မှာ အဓိက ပြုပါတယ် ။
တနည်းမြန်မာတွေဟာ မေတ္တာတရားကို..လေ့လာတယ် ။
တနည်းမေတ္တာကို ခံစားနိုင်အားသိပ်ကြိးမားသူတွေပါ ။
တနည်း မေတ္တာ အတုနဲ့ ညာလို့ မရတဲ့ လူမျိုးပါ ။
.မြန်မာတွေက ..ခံစာနိုင်အား ( SENSE ) လုပ်နိုင်စွမ်းအားမြင့်တဲ့လူမျိုးဆိုတာကို..
နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သူတွေ အခြေခံအဖြစ် သိထားဖို့( လုံးဝ ) လိုအပ်ပါတယ် ။
အခုကျနော်ဟာ Australia နိုင်ငံကို အမြန် ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
န.အ.ဖ ကျေးဇူးကြောင့်..သေဘေးက လက်တလုံးခြားလွတ်လာပြိးရောက်ခဲ့ရတာပါ ။ မလေးရှားထောက်လှမ်းရေးပေးတဲ့အသက်ဘဲရှိပါတော့တယ် ။
ကျနော်မလေးရှားထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ ကျေးဇူးကို အမြဲ မေတ္တာမျှဝေပါတယ် ။
( Certificate-3) နဲ့မူကြိုကျောင်းမှာ ကျောင်းဆရာလုပ်နေပါတယ် ။ ကျနော်လုပ်တဲ့ကျောင်းက..
ဆေးရုံကြိးက ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ မိသားစုတွေကိုဘဲ လက်ခံပါတယ် ။
ထုံးစံအတိုင်း..မိဘတွေက ချမ်းသာ...ဆရာဝန်..သူနာပြု ကလေးတွေ... တဥိးထည်းတွေကများများ....
ဒီမှာက ဆူ..အော်ငေါက် လုပ်ခွင့်က လုံးဝမရှိပါ ။
ကျနော်ကလဲ အော်ငေါက်တာကို လက်မခံတဲ့သူပါ ။
အဲဒီမှာ..နဲနဲဆူတတ် အော်တတ်သူတွေ နဲ့ 
တကယ့် ဆိုးပေ့ဆိုတာတွေ ကြုံရင်...ဆရာမတွေ လက်မြောက်ကြရတော့တာပါဘဲ ။
မိဘတွေ ခေါ် နစ်ဘက်ညှိနိုင်းကြရပေါ့ ။
တကြိမ်တော့ တကယ့်အော့ကျောအလန်ဆုံး ကျောင်းသား ကို မနိုင်ကြတော့ဘူး ။
ကျနော်ကလဲ လူသစ်....အာရှလူမျိုးဆိုတော့ အထင်ကကြိးစရာမရှိ ။ ကြားထဲ..ကျန်ဆရာ..ဆရာမတွေအားလုံးက..
အနိမ့်ဆုံး..( Diploma ) ဒီပလိုမာ ရှိကြတာ ။
ဘွဲ့ ရတွေ..ဘွဲ့ လွန်တွေနဲ့ ချည်းပါ ။
လုပ်သက်က ၂၅ နစ်..၃၀ တွေပါရှိတယ် ။
နောက်ဆုံး ကျောင်းအုပ်ကို ကျနော်က..အဲဒီကလေး..( န့မည်ပြောခွင့်မရှိပါ ) ( J ) ကို
ကျနော် နစ်ပတ်လောက် ကြိုးစားပြုပြင်ခွင့်ပေးပါတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ။
သူကလဲ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့လို့ စမ်းကြည့်ပါ ။
ကျနော်က သူ့ ကိုသူ့ မိသားစုတွင်း ခံစားချက်လေးတွေမေးတယ် ။
သူငယ်ချင်းလို ဆွေးနွေးလိုက်တာ...တနာရီလောက်ဘဲ ကြာပါတယ် ။
( ဂ-ငယ်ကွေ့ ..U- TURN ) လုပ်သလိုကိုပြောင်းသွားပါတယ် ။
မေတ္တာ ထားပြိး သူ ခံစားချက်လေးတွေကိုနားထောင်..
မင်းကို အမြဲအမှတ်ရနေမှာ စတာတွေဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။
ဒီက ကလေးတွေ ငါထိမ်းရတာ..နဲနဲခက်တယ် ။
မင်းကိုသူတို့ စံနမူနာ ထားတော့
ငါ့ကိုကူညီပါ စတာတွေဘဲပြောလိုက်ရပါတယ် ။
သူဟာ တနစ်တခါ အခုကျနော်ဆီကိုလာတွေ့ ပါတယ် ။
သူတယောက်ဘဲလာတွေ့ ပါတယ် ။
( Billy...it'saMAGIC ) လို့ ကိုပြောယူလာကြရပါတယ် ။
ကျနော်လဲ အဲဒီကနေ ( ထန်းတက်လက်မှတ်ရလိုက်တာ..)
ဒီကျောင်းမှာ..permanent ရဖို့ က အနိမ့်ဆုံး...Diploma ရထားဖို့ သတ်မှတ်ချက်ကို..
ကျနော်အတွက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ က ( ချွှင်းချက်နဲ့)
ကျနော်တဥိးထဲ..ဒီပလိုမာမရှိဘဲ...Permanent ခန့် ပေးပါတယ် ။
အခုအထိ ကျနော်က တခြားဆရာဆရာမတွေ
ကိုင်လို့ မရတဲ့သူတွေကို နစ်စဉ်ကိုင်ရပါတယ် ။
ကျနော် လက်သုံ့းကတော့...My good lovely boy ပါဘဲ ။
ကျနော် န.အ.ဖ ကို ပြောလိုတာကတော့..
.မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘ၀ တိုးတက်စေချင်တဲ့ တကယ့် စေတနာ အရင်းခံ ပြမယ်ဆိုရင်
ကျနော်ပြန်လာပြိး ကူညီပါ့မယ်ဆိုတာပါဘဲ ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကြိးမှာ..တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတဲ့ .
.လူအရင်းအမြစ်..သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေရှိပါတယ် ။
အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခကို..တနေ့ ..၃..၄ ဒေါ်လာ ပေးနိုင်ပြိး
နိုင်သားတွေ ကြွယ်ဝလာရင် အလုပ်တွေဟာ ..
ကိုင်းကျွှန်းမှီ..ကျွှန်းကိုင်းမှီ ဆင့်ကဲဆတင့်ကဲ ပေါ်လာပါမယ် ။
နိုင်ငံတော်ကြိးလဲ ငြိမ်းချမ်းသာယာလာစေရပါမယ် ။
သန်းရွှေ တခါတခါ စိတ်ကူးယဥိတတ်တဲ့..သာလွန်မင်းတရားကြိးဝင်စားတာ...
ဆိုတာ..သာလွန်မင်းတရားကြိး ရဲ့ ထင်ရှားလှတဲ့ ဥပဒေကြိးကိုဘဲ
ပြန်လေ့လာပါအုံး တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ် ။
နောက်တပတ် ဆောင်းပါးမှာ သာလွန်မင်းတရားကြိးအကြောင်းနဲ့သာလွန်မင်းတရာကြိးနဲ့ ခေတ်ပြိုင်...အိန္ဒိယ နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်ကိုအကြွှယ်ဝစေဆုံ့း ဘုရင်ကြိး နစ်ပါး နိုင်းယှဉ်ချက် ဆောင်းပါးရေးပါမယ် ။
Link to part-1............. http://www.facebook.com/note.php?note_id=184738141539023
Link to part-2 A...........http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=186892271323610
Link to part-2 B............http://www.facebook.com/note.php?saved&preview¬e_id=186892724656898%EF%BB%BF
LikeUnlike • Comment • Share
ဖိုး သိကြား လုံးဝကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Note ပါပဲ..Share ပါ Share လိုက်ပြီ..bro ရေ့
11 hours ago • LikeUnlike • 1 personLoading...
Aung Moe Thein Good , Dr. Hlaing Myint .Is it main major subject in MBA ?
11 hours ago • LikeUnlike
Aung Moe Thein You areaMain Exile Intelligence.Only one. Nobody can compare with you . I am suggest that all exile socialism democratic leaders must agree him as A Leader for all .Now we already have global real leader.Dr. Hlaing Myint isaPresident of New Burma .
Nicole Cage အရမ်းကောင်းတယ်အစ်ကို....ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တောင်ဝဲသွားတယ်....ကျွန်မတို့ဘဝတွေက သူခိုးအားပေးမဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်နေရပါလားဆိုပြီးတော့လဲ ခံစားလိုက်ရတယ်....
10 hours ago • LikeUnlike •2peopleLoading...
Kashmira Kash the greatest one............ ;)
I sent youasmiley! Want to see it? http://sb.smileycreator.com/?partner=ZNzfb010_ZUxdm901YYae
10 hours ago • LikeUnlike • 1 personLoading...
Khin Tin တော်တော် တော်တဲ့လူ။ ပညာရော၊ စေတနာရော ပြည့်ဝပါပေတယ်။
Chan Myae တကယ်ပါပဲဗျာ ဆရာကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်တာပါ
ဒီလောက် ဘ၀နဲ့ရင်ပြီးရလာတဲ့ အသိတွေကို ကျွန်တေ်ာတို့အတွက်ဖြန့်ဝေပေးတာ အရမ်းလေးစားပါတယ်ဗျာ
နိုင်ငံရေးသမားတွေပစ်တင်နေတာထက်စာရင် ဒီစာဖတ်ရတာ ပိုတန်ဖိုးရှီပါတယ်
10 hours ago • LikeUnlike •3peopleLoading...
Thinzar Aung Oh! an excellent note.
I admire Dr. Hlaing Myint.
10 hours ago • LikeUnlike
‎.လုပ်အားမရှိဘဲ ကြွယ်ဝမှု ဆိုတာ ဆရာပြောတဲ့ စကားထဲမှာပါပါတယ်
မြန်မာပြည်မှာ အကန့်ဆိုတာရှိပါတယ် နေရာ တနေရာကိုရဖို့ အကန့်လိုပါတယ်
ဘယ်နေရာမဆိုပါပဲ အကန့်ဆိုတာက အမှန်တော့ လက်လွဲရိုက်တာပါ
နောက်တခု က ဆရာပြောသလို ဆိုရင် ဘယ...်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ငွေတွေလွဲမှာလဲ
ဆိုတာ မပါသွားဘူးဆရာ သိတဲ့သူတွေပြောပေးပါလားဗျာ
ဒါဟာ အကြီးမားဆုံးငွေးကြေးခ၀ါချမှုပါပဲ ဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေ ဟာတနည်းနည်းနဲ့တော့ ရပ်တန့်လို့ရမှာပဲ .............See More
Jaw Ni ဆရာခင်ဗျာ..အခုလိုသိခွင့်ဖတ်ခွင့်ရလို့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..နောက်ထပ်ရေးတဲ့ဆောင်ပါးကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ.
9 hours ago • LikeUnlike • 1 personLoading...
Ko Naing Naing Gyi Share သွားပြီ ကိုစန်းမောင်ရေ..
Banyarraung Naing Great article !
Kyaw Khine Win အရမ်းကောင်းပါတယ်..ရှယ်သွားပါတယ် ဆရာ
8 hours ago • LikeUnlike
အမေ ကြိုင် as user: ကြိုက်ဒယ်
အမေကြိုင်: ငါ့ရဲ့စားခွက်ကို ဘယ်ကောင်ဖော်တာလဲ ...ဂန်းစာမိချင်လို့ 
7 hours ago • LikeUnlike
Zon Mie လူငယ်တွေအတွက် ဗဟုသုတ တိုးစေတဲ့ ပြီးပြည့် စုံတဲ့ဆောင်းပါး ပါပဲ။ဖတ်ရတာ သိမြင်ခွင့်ရတာအင်မတန် အကျိုး များပါတယ်။
Htet Paing လေးစားပါတယ်ဗျာ....အားပေးနေပါတယ်.....
6 hours ago • LikeUnlike
Nge Naing ဖတ်လိုက်ရတာ တ၀ပဲ။
တိုက်မလုပ်ချင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီFACEBOOk COMMENT ပေါ်မှာလည်းနှစ်ခါ
နိုင်ငံတွေကငွေလွှဲသူတွေကိုဆွဲစိလျှင်ဖမ်းအောင်တိုင်လျှင် န.အ.ဖအထိနာတဲ့အပြင်ငွေလွှဲသူတွေနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပ
ဘာမှမလုပ်တာထက်စာလျှင်ဒီငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဆွဲစိလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဒီကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီးတူညီတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလျှင်ဆက်သွယ်လိုက်ကြပါ။ဒီဆောင်းပါးအတွက်ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်နှင့်ကိုမောင်မောင်ဝမ်းကိုအထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကွန်မန့်ကိုဆရာလှိုင်မြင့်ဖတ်ရလျှင်လင့်ခ်လုပ်လို့ရ
မယ့်ဟာလေးထားခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ။ရှေ့လာမယ်ဆောင်းပါးကိုစောစ့်မျှော်နေပါတယ်။See More
Kyaw Aye ကျွန်တော်ရှယ်လိုက်ပြီခင်ဗျ။
Htar Htar Oo ဒါဆိုရင် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ငွေတွေလွဲရမှာလဲ?? လူကြုံတွေနဲ့ ပါးလိုက်ပြီးတော့ မြန်မာက မိသားစုတွေက မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ အဲဒေါ်လာကို ပြန်ရောင်းရတယ်...ဝယ်လိ်ုက်တဲ့ သူတွေရဲ့ လက်ထဲက အဲဒီဒေါ်လာတွေကကော ဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ သူတို့ ဘယ်လို ငွေပြန်ဖော်သလဲ... ဟွန်ဒီနဲ့ လွှဲရင် အထက်ကပြောသလို သူခိုးအားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အခုပြောသလို လူကြုံနဲ့ ပါးတဲ့နည်း ကိုယ်ပြန်တဲ့အခါ ယူသွားပြီး ပြန်ရောင်းတာကရော အတူတူပဲလား? သိချင်ပါတယ်ရှင်။
3 hours ago • LikeUnlike • 1 personLoading...
Swelu Taw နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေလိုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
2 hours ago • LikeUnlike
Nang Wai Wonderful suggestions, experience, and studies.
Thank for sharing, Ko Hlaing Myint. However,
I think your words will not be able to break in to the ears of than shwe and Na. Aa. Pa.
about an hour ago • LikeUnlike
Strong Hammer ကျေးဇူးတင်တယ်
Posted by Mr Htay Tint at 1:01 PM